ဂဏန်းဗေဒင် (၁..မှ..၉)အထိအသေးစိတ်ဟောထားသည့်ဂဏန်းဗေဒင်..(ဗေဒင်ဝါသနာအိုး) | ပြည်သတင်း
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့ 1 . 10 . 19 . 28 နေ့မွေးသူများ အားလုံး
( 1 ) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
ဒီ “နျူမရိုလိုဂျီ” ဆိုတဲ့ သင်္ချာဗေဒင်ပညာကို ဘီစီ ၆ရာစုနှစ်လောက်မှာ “ဘာဘီလုံးနီးယန်းယဉ်ကျေးမှု” ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ “ချားလ်ဒီးယန်း” လူမျိုးစုတွေက တီထွင်ခဲ့ကြတာလေဗျာ။ အမှန် ကတော့ သင်္ချာဗေဒင်မှာသုံးတဲ့ သင်္ချာနံပါတ်တွေဟာ ဂြိုဟ်တွေရဲ့သင်္ကေတတွေဘဲဗျ။ နံပါတ်(၁)ဆိုရင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (နေမင်း) ရဲ့ သင်္ကေတ။ နံပါတ်(၂)ဆိုရင် တနင်္လာဂြိုဟ်(လမင်း)ရဲ့ သင်္ကေတ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဂြိုဟ်က (၇)လုံးဘဲ ရှာတွေ့သေးတယ်ဗျ။ “တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ” ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဂဏန်းသင်္ချာမှာက (၁)ကနေ (၉) အထိ (၉)လုံးဖြစ်နေတယ်။ နံပါတ် (၁ဝ)ကို (၁)လို့ ပြန်ယူတော့ အားလုံး (၉)လုံးပေါ့ဗျာ။ ဂြိုဟ်က(၇)လုံးနဲ့ ဂဏန်းက(၉)လုံး ဆိုတော့ မကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာ “ချားလ်ဒီးယန်းတွေက တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်(နေမင်း)ဟာ ကောင်းကင်မှာ အကြီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ဂဏန်းနှစ်လုံး ပေးမယ် ဆိုပြီး တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်အတွက် (၁)ဂဏန်းအပြင် (၄)ဂဏန်းကိုပါ အပိုင်စားပေးလိုက်တယ်။ (၁)ဂဏန်းကို တနင်္ဂနွေ အဖို(+)လို့ သတ်မှတ်ပြီး (၄)ဂဏန်းကို တနင်္ဂနွေအမ(-) လို့ သတ်မှတ်တယ်။ နောက် ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လမင်း(တနင်္လာဂြိုဟ်)ကို (၂)ဂဏန်း အပြင် (၇) ဂဏန်းကိုပါ ပူးတွဲအပိုင်စားပေးလိုက်တယ်။ သူ့ကိုကျတော့ (၇)ဂဏန်းကို တနင်္လာအဖို (+)လို့ သတ်မှတ်ပြီး (၂)ဂဏန်းကို တနင်္လာအမဓာတ်(-)လို့ သတ်မှတ်ပြန်တယ်။
(၁)ဂဏန်းဟာ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဆိုတဲ့ “နေမင်း” က စိုးမိုးထားတာလေ။ နေမင်းရဲ့ သင်္ကေတ ဂဏန်းတစ်ခုဘဲ။ နေမင်းကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေစင်္ကြာဝဠာအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်လာသလို လူသားအပါအဝင် သက်ရှိတွေဟာလည်း နေမင်းသာ မရှိရင် ဘယ်လိုမှ အသက်ရှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် (၁)ဂဏန်းဟာ သိပ်ပြီး အရှိန်အဝါ ကြီးတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဗျာ။
(၁)ဂဏန်းဟာ နေမင်းရဲ့ ဂဏန်းဖြစ်သလို၊ ဂဏန်းသင်္ချာမှာ “ပထမဆုံးနေရာ” မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် (၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထင်ထင် ပေါ်ပေါ် ရှိတယ်။
အကြီးအမှူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ အဆင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံအကြီးအကဲလိုဖြစ်နိုင်သလို ၊ အဆင့်နိမ့်တဲ့ ဘဝမျိုးမှာဆိုရင်လည်း သူ့အဆင့်နဲ့သူ အကြီးအကဲဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဗျ။ ဥပမာ- ရက်ကွက်ထဲမှာဆို ရက်ကွက် လူကြီးလိုမျိုး၊ အလုပ်သမားထဲမှာဆို အလုပ်သမားခေါင်း လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ (၁)ဂဏန်းသမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝ အဆင့်အတန်းနဲ့ကိုယ် အကြီးအကဲ၊ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ကံဇာတာပါလာသူတွေလို့ ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ (၁)ဂဏန်း သမားတွေရဲ့ ယေဘူယျ လက္ခဏာ စရိုက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် -
= (၁)ဂဏန်းသမား တွေဟာ ရုပ်ဝါဒဆန်တယ်။ လက်တွေ့ကျတယ်။ စိတ်ကူးသိပ်မယဉ်တတ်ဘူး။ နေရာတကာမှာ ဦးဆောင်လိုတယ်။ လွှမ်းမိုးလိုတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရား နည်းပါးတတ်တယ်။ ခေါင်းမာတယ်။ အကြောမာတယ်။ အကြောက် အလန့်နည်းတယ်။ နေရာတကာ အပေါ်စီးကသာ နေလိုတယ်။
= ရည်မှန်းချက် အလွန်ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရည်မှန်းချက်ကြီးတာကို လူသိ သိပ်မခံဘူး။ လျို့ဝှက်ကြံစည်တတ်တယ်။ အချိန်အခါကောင်း အခွင့်အရေးကောင်းစောင့်နိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းကို အမြဲကြံစည်နေတယ်။ စီးပွားအရှာ ကောင်းတယ်။ ဇွဲကောင်းတယ်။ စိတ်အပြောင်းအလဲနှေးတယ်။ တစ်ယူသန်ဆန်တတ်တယ်။
= ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တည်ငြိမ်တယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ ခြောက်ရုံနဲ့ မကြောက်တတ်သလို တော်ရုံတန်ရုံ မြှောက်ရုံနဲ့လည်း မမြောက်တတ်ဘူး။ (၄)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ ကွာခြားတာက သူတို့ဟာ ဘဝအပြောင်းအလဲ နှေးကွေးတယ်။ ရုတ်ချည်း တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်ခဲတယ်။ တက်မိရင်လည်း တော်တော်နဲ့ ပြန်မကျဘူး။ ကျမိရင်လည်း တော်တော်နဲ့ ပြန်မတက်တော့ ဘူး။
= လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေလေ့မရှိဘူး။ (ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သူတို့လောက် သိတယ်၊ တတ်တယ်လို့ မထင်လို့၊ ဒီနေရာမှာတော့ (၄)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ သွားတူနေပါတယ်)။ သူတို့ဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ သီးခြားလိုဖြစ်နေတယ်။ အပေါင်းအသင်းကို ရွေးချယ်ပေါင်းလေ့ရှိတယ်။ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေ နည်းတတ်တယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားအတော်များများဟာ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းကို ရတာများတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်မှာ အလွန်လွှမ်းမိုးတတ်ပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ် လည်း နည်းတတ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ (၁)ဂဏန်း သမား ယောင်္ကျားတွေဆိုရင် မိန်းမအပေါ်မှာ အလွန်အနိုင်ကျင့်တတ်လေ့ရှိတယ်။(အထူးသဖြင့် (၂၈)ဂဏန်း)
= ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ လင်ကောင်း၊ မိခင်ဖခင်ကောင်းတွေ ဖြစ်တာများတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့အချစ်ကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ မဖော်ပြတတ်ပေမယ့် အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့ အလွန်တာဝန်ကျေတတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့နေရာ၊ ဆေးပညာ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာဆိုရင် အလွန်ရာထူး တက်လွယ်ကြတယ်။ အောင်မြင်လွယ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ဆို “မရွယ်ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်” ဆိုတာလို မြင့်မားတဲ့ နေရာဌာန တွေကို မကြံရွယ်ဘဲ ရောက်လာတတ်ကြတယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ အဆိုးဆုံး ဉာဉ်ကတော့ သူတို့ဖြစ်ချင်တာကို ဇွတ်အတင်းဖြစ်စေလိုကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ဂဏန်းသမားတစ်ယောက် ပျက်စီးချိန်တန်လာရင် အချိန်ဆွဲနေရတာကို သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ ဇွတ်အတင်း ထ,လုပ်ကြတဲ့ အချိန်မှာဘဲဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ သူတစ်ပါးပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ လက်ခံလေ့မရှိဘူး။ သူတို့ကို နှစ်သိမ့် ဖြောင်းဖြနိုင်သူဆိုလို့ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဘဲ ရှိတယ်။ ကောင်းကင်မှာ “နေ နဲ့ လ” ဟာ နှစ်ပါးစုံတွဲနေသလို (၁)ဂဏန်း သမားတွေဟာ (၂)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ အလွန်သင့်မြတ်ကြတယ်။
(၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ (၂)ဂဏန်းသမားတွေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးလွယ်တတ်ကြတယ်။ စောင့်ရှောက်တတ်ကြတယ်။ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာလည်း (၁)ဂဏန်းသမားတွေ အပေါ်မှာ အလွန်သစ္စာရှိတတ်ပြီး ပျက်စီးအောင် လုပ်လေ့ မရှိ တတ်ကြဘူး။ (၁)ဂဏန်းသမားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေ၊ ဘဝအဖော်မွန်ဟာ (၂)ဂဏန်းသမားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးက (၅)ဂဏန်းသမားနဲ့ (၇)ဂဏန်းသမား တွေဖြစ်တယ်။ (၁)နဲ့ (၄)ဟာ အဖို နဲ့ အမဓာတ်ဆိုပေမယ့် သိပ်မတည့်တတ်ဘူး။ (၁)ဂဏန်းသမားတွေကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာက (၈)ဂဏန်းသမားနဲ့ (၉)ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေ အထူးသတိထားရမှာက လောဘသက္ကာယကြီးလွန်းတာ၊ အလွန်အမင်း တိုးတက်ကြီးပွား ချင်တာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ရောင့်ရဲနိုင်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီလို မရောင့်ရဲနိုင်မှုကြောင့် နောက်ဆုံး ကျဆုံးပျက်စီးခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ (၁)ရက်နေ့ မွေးဖွားသူများနဲ့ (၂၈)မွေးဖွားသူများ ဟာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဘာသာရေးဘက်မှာ အားနည်းတတ်ကြတယ်။ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်ဝင်ယုံကြည်လာပြီဆိုရင်လည်း သူများထက် ထူးအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သူတွေဖြစ်တယ်။
= (၁)ဂဏန်းသမားတွေ နောက်ဆုံးသတိထားရမှာက သူတို့ဟာ နေမင်းရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့အတွက် နေဆိုတာ အထွက်ရှိသလို၊ အဝင်ရှိပါတယ်။ နေမွန်းတည့်အချိန်မှာ ထွန်းတောက် ပူပြင်းသလောက် နောက်ဆုံးမှာ နေဝင်ချိန်ရောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ အလင်းဓာတ်လည်း ပျောက်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၁)ဂဏန်းသမားများဟာ ဘဝနေဝင်ချိန်၊ တတိယ အရွယ်မှာ အထူးဂရုပြုပါ။ (လူတိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် ) အကျနာတတ်ပါတယ်။ အိုဇာတာ ညံ့တတ်ပါတယ်။ Current of Destiny ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံး မွေးသက္ကရာဇ် ခုနှစ်ဂဏန်းကောင်းလွန်း တဲ့သူများသာ တတိယအရွယ်အထိ ကောင်းစားတတ်ပြီး၊ မွေးခုနှစ်ဂဏန်းမကောင်းပါက အိုဇာတာအလွန်ညံ့တတ်တာ သတိပြုပါ။
(၁)ဏန်းမှာလည်း ယေဘူယျ စရိုက်လက္ခဏာများ
(၁) ရက်နေ့မွေးသူကို ကျွန်တော်တို့နျူမရိုလိုဂျီပညာရှင်တွေက “ထီးတည်း” ဂဏန်းလို့သတ်မှတ်တယ်။ အမှန်တော့ (၁)ရက်နေ့ကနေ (၉)ရက်နေ့အတွင်း မွေးတဲ့သူမှန်သမျှ “ထီးတည်း” ဂဏန်းတွေချည်းပါဘဲ။ “ထီးတည်း” ဂဏန်းဆိုတဲ့ အတိုင်း (၁)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ ဘဝဟာ အထီးကျန်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ သိပ်မဖြစ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သိပ်ပြီး ဒွေးရောယှက်တင်မနေတတ်ဘူး။ အသက်ကြီးလေ အထီးကျန်ဖြစ်လေ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့နဲ့ သူတို့ မိသားစု၊ တပည့်တပန်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးက “ချစ်ကြောက်ရိုသေ” လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ (၁ဝ)ဂဏန်းသမား တွေကျတော့ ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီး ဝီရိယနည်းတယ်။ ဝီရိယထက် ဉာဏ်ကို ပိုမိုအားကိုးတတ်တယ်။ မိသားစု သံယောဇဉ် နည်းတယ်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းတယ်။ အကင်းပါးတယ်။
(၁၉)ဂဏန်းကျတော့ အပေါင်းအသင်းဆန့်တယ်။ လူချစ်လူခင်များတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင် တတ်တယ်။ နာမည်အလွန်ကျော်ကြားတတ်တယ်။ (၂၈)ဂဏန်းတွေကတော့ ခေါင်းအမာဆုံးဘဲဗျို့။ ဇွတ်တရွတ်နိုင်တယ်။ ဒေါသ အလွန်ကြီးမယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ် အလွန်နိုင်မယ်။ အပေါင်းအသင်းများသလောက် လူချစ်လူခင်မများတတ်ဘူး။ စီးပွားရေးကို ကျားကုတ်ကျားခဲ ရှာတတ်တယ်။ အလွန် အတ္တစိတ်ကြီးမယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ (၂၈)ရက်ဖွားတွေဟာ တကယ့်“ဖိုက်တာ” တွေများတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တတိယအရွယ်မှာတော့ စိတ်ပျော့ပျောင်းသွားတတ်ကြတယ်ဗျ။
(၁)ဂဏန်းသမားတွေထဲက ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များ
(၁)ဂဏန်းသမား ကမ္ဘာကျော်တွေက များလွန်းလို့ လူသိများတဲ့ အနည်းအကျဉ်းလောက်ဘဲ ပြောတော့မယ်။ သူတို့ကတော့ ” ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ် က(၂၈)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် က(၁၉ရက်ဖွား)၊ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတ ဘောရစ်ယဲ့ဆင် က(၁)ရက်ဖွား၊ ဟောလီဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘရုစ်ဝီလီ က(၁၉)ရက်ဖွား၊ ဝေလမင်းသမီး
လေဒီဒိုင်ယာနာ က(၁)ရက်ဖွား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ နာဇီဂျာမဏီတွေရဲ စစ်ဦးကျိုးသွားစေတဲ့ ဆိုဗီယက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မာရှယ်ဇူးကော့ က(၁)ရက်ဖွား၊ အင်အားကြီးလှတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကို နိုင်ငံထဲက မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်သမ္မတကြီး ဟိုချီမင်း က(၁၉)ရက် ဖွား။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း အင်ဒီရာဂန္ဒီ က(၁၉)ရက်ဖွား၊
အက်ဖ်ဘီအိုင်ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့ တင်စားခေါ်ခံရတဲ့ ဂျေအက်ဒဂါဟူးဗား က(၁)ရက်ဖွား။ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ကနေဒီရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဂျက်ကလင်းကနေဒီ က(၂၈)ရက်ဖွား။ အော်စကာဆုများပိုင်ရှင်
ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး ဂျိုဒီ ဖော်စတာ က(၁၉)ရက်ဖွား၊ စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဝတ္တုကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတဲ့ ရုရှားစာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်စတွိုင်း က(၂၈)ရက်ဖွား။ အခုတလော အီရန်နိုင်ငံမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ သမ္မတ အာမက်ဒီနီဂျက် က(၂၈)ရက်ဖွား။ တင်းနစ် အလှမယ် မာရီယာရှာယာပိုဗာ က(၁၉)ရက်ဖွား။ တစ်ခေတ် တစ်ခါက အမေရိကန် ဟောလိဝုဒ် ဘုရင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ မာရီလင်မွန်ရိုး က(၁)ရက်ဖွား။ အမေရိကန်နိုင်ငံကို တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ အိုစမာဘင်လာဒင် က(၁ဝ)ရက်ဖွား။ ကြိုးပေးအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အီရတ်သမ္မတဟောင်း ဆဒမ်ဟူစိန် က(၂၈)ရက်ဖွား။ အဲဒါတွေပါဘဲဗျား။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့2. 11 . 20 . 29 နေ့မွေးသူများ အားလုံး
(3) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (၂)ဂဏန်းသမားဗျ။ အနောက်တိုင်းရာသီခွင်မှာတော့ သြဂုတ်လ (၂၉)ရက်ဟာ “ကန်ရာသီခွင်” ထဲမှာ ကျရောက် နေတယ်ဗျ။ ကန်ရာသီဟာ အနုပညာသည်တွေ ပေါ်ထွန်းတတ်တဲ့ ရာသီလည်း ဖြစ်နေပြန် (၂၉)ဂဏန်းကလည်း (၂)ဂဏန်း သမားတွေမှာ အတော်ထက်မြက်တဲ့ ဂဏန်းဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် (၂၉)ဂဏန်းဟာ တနင်္လာ(စန်း)နဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ် တို့ရဲ့ အတွဲ ဖြစ်နေလေတော့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ လိင်ကိစ္စအရှုတ်အထွေးတွေကို အတော် အားပေး တတ်တဲ့ ဂဏန်း ဖြစ်နေပြန်တယ်။
(၂)ဂဏန်းဟာ တနင်္လာဂြိုဟ်ရဲ့ သင်္ကေတဘဲ။ နေမင်းဟာ ပူပြင်းမှုကို သရုပ်သကန်ဖော်ပြပြီး လမင်းကတော့ အေးချမ်းမှုရဲ့ သရုပ်သကန် ကို ဖော်ပြတယ်လေ။ နောက်ပြီး နေမင်းဟာ ဖခင် နဲ့တူတယ်။ လမင်းဟာ မိခင်နဲ့တူတယ်။ နေမင်းဟာ အားကောင်းတဲ့ အဖိုဓာတ်ဖြစ်ပြီး လမင်းကတော့ အားကောင်းတဲ့ အမဓာတ်ဖြစ်တယ်လေ။
(၂)ဂဏန်သမားတွေက စိတ်ဓာတ်နူးညံ့တယ်။ ပျော့ပြောင်းတယ်။ မိခင်ဆန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ မိသားစုကို ခင်တွယ်စိတ်များတယ်။ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မှု များတယ်။ တွေးတော ဆင်ခြင်မှုများတယ်။ စိတ်ကူးဉာဏ် အလွန်ကွန့်မြူးတတ်တယ်။ တီထွင်ကြံဆတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် (၂)ဂဏန်း သမားတွေဟာ အနုပညာရှင်တွေ၊ တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးပညာရှင်တွေ၊ ပန်းချီဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေ၊ တီထွင်သူတွေ အများဆုံးဖြစ်လာ
တတ်ကြတယ်ဗျ။ သူတို့ဟာ ပုံတူကူးချတာထက် ကိုယ်ပိုင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ပိုပြီး နှစ်ခြိုက်တတ်ကြ တယ်။ ဒါကြောင့် (၂)ဂဏန်းသမားဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် တို့၊ ဘရစ်တနီစပီးယား တို့ဟာ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေနဲ့ ဆန်းသစ်အောင်မြင် လာကြတာဘဲဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာကျော် တီထွင်သူကြီး “သောမတ် အက်ဒီဆင်” ဟာလည်း ပါပဲ။
သောမတ်အက်ဒီဆင်ရဲ့ ကျေးဇူးကတော့ ကျွန်တော်တို့ခေတ်လူသားတွေ အတွက် အလွန်ကျေးဇူး ကြီးမားလှပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့
ဗေဒင်လောကမှာလည်း နာမည်ကျော် (၂)ဂဏန်းသမား
နှစ်ယောက် ပေါ်ထွန်းခဲ့ ဘူးတယ်ဗျ။
တစ်ယောက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက္ခဏာပညာကို စတင် အုတ်မြစ်ချခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး “ဆရာစန္ဒြ” ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လက္ခဏာနဲ့ သင်္ချာဗေဒမှာ သူမတူအောင် ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ “ဆရာစံမင်း” တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဆရာစန္ဒြ” က (၂ဝ)ရက်ဖွား ဖြစ်ပြီး၊ “ဆရာစံမင်း”ကတော့ (၂၉)ရက်ဖွားဖြစ်ပါတယ်။
(၂)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ကတော့
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ရုပ်ပိုင်း နဲ့ စိတ်ပိုင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဖက်ကို ပိုမို အလေးသာသူတွေဖြစ်တယ်။ စိတ်ကူးယဉ် တတ်တယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတယ်။ တီထွင်ကြံဆ တတ်တယ်။ အတွေးအခေါ်မြင့်မားတယ်။ စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာရပ် တွေကို ဝါသနာပါတယ်။ စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ လောကီပညာရပ်တွေကိုလည်း စိတ်ဝင် စားမှု များတယ်။ စာကောင်းပေကောင်းတွေကို ဖတ်ရှုရတာ ဝါသနာပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းပေမယ့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာတော့ အားနည်း သူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းတွေဟာ လေထဲမှာ ဆောက်တဲ့အိမ်လို လွင့်ပြယ်ပျောက်ပျက်သွားရတာ ပိုများ တယ်။ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ကူးကောင်း သလောက်သာ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရင် ထိပ်တန်းအောင်မြင်သူတွေဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တဲ့သူက ပိုများပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဇွဲ၊ ဝီရိယလည်း နည်းသူတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးအောင်မြင်သည်အထိ မလုပ်တတ် ကြဘဲ တိုးလို့တန်းလန်းနဲ့တွင် ရပ်နေတတ် ကြပါတယ်။ သူတို့ဘဝမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ မပြီးပြတ်သေးဘဲ ပစ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း၊ အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းတွေဟာ ရှုပ်ပွလို့သာ နေပါတော့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ကောက်ရိုးမီးလို တစ်ဟုန်းဟုန်း ဖြစ်တတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မီးသေသွားတတ်ပါတယ်။
= သူတို့ဟာ လူချမ်းသာမှုထက် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပိုမိုအလေးထားသူတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆင်းရဲတာကို လုံးဝခံနိုင်ရည် မရှိပါဘူး။ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာရင် ကျန်းမာရေးပါ ကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ် တက်လွယ်၊ ကျလွယ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကျရောဂါကို ခံစားရလွယ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ပျော့သလို၊ လူလည်း ပျော့ပါတယ်။ အပင်ပန်း၊ အဆင်းရဲဓာတ်ကို မခံနိုင်ကြတတ်ဘူး။ လူကသာ “လေးလုံးခြောက်ဖက်” ဝဝဖြိုးဖြိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အပင်ပန်းဒဏ် မခံနိုင်ကြသူတွေက ပိုများပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်နုပြီး အလွန် အကဲဆတ်သူများ ဖြစ်ကြတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တယ်။ တုန့်ပြန်မှု လျှင်မြန်တယ်။ သူတို့ စိတ်လှုပ်ရှားလာရင် ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့ အမူအယာကို ဖုံးဖိမရနိုင်အောင် ဖြစ်တတ်တယ်။ ဟန်ဆောင်မကောင်းကြဘူး။ စိတ်ကောက်လွယ်တယ်။ စိတ်ထိခိုက် လွယ်တယ်။ အမှတ်သညာ ကြီးတယ်။ ပြီးပြီး ပျောက်ပျောက် သဘောမထားနိုင်ကြဘူး။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ တစ်ဖက်သားကို အလွန်သနားလွယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ခြင်းစာတရားရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာနဲ့ ကူညီတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကပ်စေးနဲ မိရင်လည်း သူမတူအောင် ကပ်စေးနည်းတတ်တယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေသူ ရှားပါတယ်။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် အဆွေးသမား၊ အငေးသမားလို ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အကြောင်း မသိရင် မာနကြီးသလို၊ လူမှုဆက်ဆံရေး မကောင်းသလို ထင်ရတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ဆက်ဆံရေးမကောင်းသူ၊ တစ်ကိုယ် ကောင်းဆန်သူတွေလို့ မကြာခဏ အထင်မှားခံရတတ်တယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အပေါင်းအသင်း နဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက် အပေါ်မှာ အလွန်သစ္စာရှိတာများတယ်။ သူ့ဖက်ကသာ စ,မဖောက်ရင် ကိုယ့်ဖက်က စ,မဖောက်တတ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ မကျေနပ်မှုတွေများလာရင် အလွန်အရွဲ့တိုက်ပြီးလုပ်တတ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် မျှတသူတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ အစွန်းရောက်မိပြီဆိုရင် ကျန်တဲ့နေ့ဖွားတွေ လိုက်မမှီအောင်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကို မွှေးခဲ့တဲ့ “အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ” ဟာဆိုရင် (၂ဝ)ရက်ဖွား (၂)ဂဏန်းသမားဖြစ်တယ်။ သူနဲ့အတူတွဲခဲ့တဲ့ အီတလီအာဏာရှင် မွတ်ဆိုလိုနီဟာလည်း (၂၉)ရက်ဖွား (၂)ဂဏန်း သမားဖြစ်တယ်။
= တကယ်တော့ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ လူကြောက်တတ်ပါတယ်။ လူတောသူတောထဲ သိပ်မဝင်ဆန့်ကြပါဘူး။ လူထု ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ (၂)ဂဏန်းသမား တွေဟာလည်း ဟန်ဆောင်ပြီးသာပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် လူကြောက်တတ် သူများဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအများကြီးနဲ့ သိပ်ပြီး မဆက်ဆံလိုကြပါဘူး။ အပေါင်းအသင်းနည်းပြီး အပေါင်းအသင်းကို ရွေးချယ် ပေါင်းသင်းတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဘဝင်မကျရင် အဲဒီလူဆီက ရွှေထွက်မယ်ဆိုရင်တောင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ပေါင်းလေ့ မရှိကြပါဘူး။
= (၂)ဂဏန်းသမားမှန်ရန် အနောက်တိုင်းဆေးပညာမှာ “Phobia” လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ခုခုအပေါ်မှာ အကြောက်ကြီးတဲ့ အစွဲအလန်းမျိုးရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့က လူကြောက်တယ်။ တစ်ချို့က အမြင့်ကြောက်တယ်။ တစ်ချို့ သွေးမြင်ရင် ကြောက်တယ်။ ဒီထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း နှင်းဆီပန်းမြင်ရင်ကြောက်တာတို့။ တွယ်အပ်ချိတ်ကို မြင်ရင် ကြောက်တာတို့ လည်း တွေ့ဘူးပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုကြတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။ ဒီ ဖြစ်စဉ် နှစ်ခုကြားမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ (၂)ဂဏန်းသမားတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ အေးချမ်းမှုဘက်ကို လိုက်သွားတတ်ကြတဲ့ သူတွေက ပိုများပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ဆင်းရဲမှုကို မခံနိုင်သူတွေဖြစ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းရင် ကျန်းမာရေးပါ ကျဆင်း လာလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ၊ ညဘက် အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါတွေဟာ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာအများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါများ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ Accident ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံတဲ့ ကိစ္စတွေဟာလည်း (၂)ဂဏန်းသမားတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ စိတ်ရောဂါတွေလည်း ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ သနားကြင်နာလွယ်ပြီး ကိုယ်ခြင်းစာတရားမြင့်မားသူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စ တွေမှာ သနားတာကနေစပြီး သဒ္ဓါလွန်ရာကနေ တဏှာကျွံတတ်ပါတယ်။ မိမိထက် နိမ့်ကျသူများနှင့် အင်မတန်ညိစွန်း လွယ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ ရွေးစရာ (၂)ယောက်ရှိလာရင် အားနည်းတတ်သူဘက်ကို ပိုမို အလေးသာတတ်ပါတယ်။
= ဒါပေမယ့်လို့ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ဆတ်ပြီး၊ သည်းခံမှုနည်းသူတွေ ဖြစ်သူမို့ အိမ်ထောင်ရေး အလွန် ကောင်းမွန်သူ ရှားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သည်းမခံနိုင်ဘဲ ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲပြီး လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်ခြင်းများကြောင့် ဘာမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာလေးနဲ့ အိမ်ထောင်တွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ မဟာဘုတ်မှာ အကြွင်း မကောင်းရင် မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ဆက်များတတ်ပါတယ်။
= သူတို့ဟာ စိတ်နု၊ စိတ်ဆတ်ပြီး မခံချင်စိတ်ကြီးမားကြသူများမို့ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းများနဲ့ မသင့်တော်လှပါဘူး။ သူများရဲ့ လက်အောက် မှာ လုပ်ရရင်လည်း သင့်တော်မှုမရှိပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများနဲ့သာ သင့်လျှော်ကြပါတယ်။
= သူတို့ဟာ လမင်းရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တာကြောင့် လပြည့်၊ လကွယ် ရှိသလို သူတို့ဘဝဟာလည်း နိမ့်မြင့်တက်ကျ များတတ်ပါတယ်။ တက်တဲ့အခါတက်၊ ကျတဲ့ အခါကျ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၂)ဂဏန်းသမားအတော်များများဟာ အိုဇာတာတော့ ကောင်းကြပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်း (ဒုတိယအရွယ်)မှာ အလွန်နိမ့်မြင့် တက်ကျများတတ်ပါတယ်။
= (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်နုသူများ၊ အကဲဆတ်သူများ၊ စိတ်အမှတ်ကြီးသူများလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်က နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတာမို့ ချော့လိုက်၊ မြှောက်လိုက်ရင်လွယ် အလွယ်တကူ စိတ်ပျော့ကျသွားသူ များလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆတ်ပေမယ့် အာဃာတ ကြီးသူများတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
(၂)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ သီးခြားဂုဏ်အင် လက္ခဏာများ
(၂)ရက်ဖွားများဟာ ပေါင်းရသင်းရ အလွန်ခက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေး မကောင်းလှပါဘူး။ ပညာမာနလည်း ကြီးကြပါတယ်။ ကပ်စေးနဲသူတွေလို့လည်း အပြောခံရတတ် ပါတယ်။ လက်ပေါက်ကပ် တယ်။ လူ့ဂွစာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ ချော့ပေါင်း၊ မြှောက်ပေါင်းရင်တော့ အလွန်အဆင်ပြေတတ်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁)ရက်ဖွားကြတော့ ထူးခြားတာက (၁)ဂဏန်း (၂)လုံးပူးနေလို့ တနင်္ဂနွေနေမင်းရဲ့ ဂုဏ်အင်တွေလည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင် နေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ (၁၁)ရက်ဖွားတွေဟာ တီထွင်စွမ်းအားမြင့်မားပြီး၊ အတွေးအခေါ်ကောင်းကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အားနည်းပါတယ်။ ဘာသာရေးကို လေးစားလိုက်နာ သူတွေဖြစ်တယ်။ မိရိုးဖလာ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုထက် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေရှိသူဖြစ်တယ်။ ကြီးပွားတိုးတက်လိုစိတ်ရှိပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်တာကြောင့် ကြီးပွားသင့်သလောက် မကြီးပွားသူတွေဖြစ်တယ်။
(၂ဝ)ရက်ဖွားများကြပြန်တော့ အစွန်းရောက်လွယ်တယ်။ လောဘသက္ကာယ ကြီးမားတယ်။ အတ္တစိတ် ကြီးမားတယ်။ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ အစွဲအလန်း ကြီးမားတယ်။ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ပိုရှိတယ်။ လူချစ်လူခင်လည်းများမယ်။ ဒါပေမယ့် Current of Destiny လို့ခေါ်တဲ့ ကံကြမ္မာ အဆုံးသတ်ဂဏန်းမကောင်းရင် ဥပစ္ဆေဒကံ ရှိတယ်။ ဘဝအဆုံးသတ်မကောင်းတတ်ဘူး။
(၂၉)ရက်ဖွားများကတော့ တစ်မူထူးတာက စီးပွားရေးကို ကျားကုတ်ကျားခဲ ရှာလိုစိတ်ရှိတယ်။ လောဘကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မကြာခဏ စီးပွားပျက်စီးတတ် တယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ လိင်ကိစ္စအရှုတ် အထွေးများတယ်။ လိင်စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းထန်တတ်တယ်။ ဒီအတွက် နာမည်ပျက်၊ အရှက်ကွဲရတာ၊ သိက္ခာကျရတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့လွဲမယ်။ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ဖြစ်လွယ်မယ်။ (မရိုသေစကား- အငယ်အနှောင်း ဖြစ်လွယ်မယ်)။ မတော်တဆထိခိုက်လွယ်ပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်လွယ်မယ်။
သူ့မှာလည်း Current of Destiny မကောင်းရင် ဥပစ္ဆေဒကံ ရှိတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေအပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်မှုများမယ်။ ကျန်တဲ့ (၂)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အပေါင်းအသင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်မှာ သစ္စာတည်ကြည်မှု နည်းမယ်။ ကဲ- ကိုသိန်းဖေ ရေ။ ဒါဆိုရင် (၂)ဂဏန်းသမား တွေအကြောင်း ပြည့်စုံပြီထင်ပါတယ်။
(၂)ဂဏန်းသမားများနှင့် မိတ်ဘက် ၊ အိမ်ထောင်ဘက်
(၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ (၁)ဂဏန်း၊ (၅)ဂဏန်း၊ (၇)ဂဏန်းတွေနဲ့ မိတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ဘက်ကတော့ အဓိကက (၈)ဂဏန်းပါဘဲ။ (၈)ဂဏန်းဟာ (၂)ဂဏန်းကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ (၄)ဂဏန်းဟာလည်း (၂)ဂဏန်းအတွက်မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် (၂)ဂဏန်းသမားတွေဟာ (၄)ဂဏန်း(၈)ဂဏန်း သမားတွေနဲ့ မိတ်ဘက် မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာ ပေါင်းခြင်း (၄) နဲ့ (၈) ကျတဲ့ နှစ်တွေ၊ (၄)နဲ့(၈)အတွဲတွေ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ သက္ခတ် ဗေဒင်မှာ စနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သက်ရောက်နှစ်တွေမှာ သတိထားရတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ (၂)ဂဏန်းသမားများကတော့ – အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ (၂ဝ)ရက်ဖွား၊ သူရဲ့ ဝါဒဖြန့်ချိရေးမှူး ဂျိုးဇက်ဂိုးဘဲလ် က (၂၉)ရက်ဖွား၊ အီတလီအာဏာရှင် မွတ်ဆိုလိုနီ (၂၉)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန်အက်ဖ် ကနေဒီက (၂၉)ရက်ဖွား၊ သောမတ်အက်ဒီဆင်က (၁၁)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန်လူရွှင်တော်ကြီး ဘော့ဟုတ်က (၂၉)ရက်ဖွား၊ အဆိုကျော် ဘရစ်တနီစပီးယားက (၂)ရက်ဖွား၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်က (၂၉)ရက်ဖွား၊ မော်တော်ကား တာရာတွေကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ ချားလ်ဂွတ်ရီးယားက (၂၉)ရက်ဖွား၊ နာမည်ကြီး မော်ဒယ် စင်ဒီကရောဖို့ဒ် က (၂ဝ)ရက်ဖွား၊ လေယာဉ်ပျက်ကျကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ကုလသမ္မဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒက်ဟမ္မာရှိုးက (၂၉)ရက်ဖွား၊ ဘောလုံးစတား ဒေးဗစ် ဘက်ဟမ်းက (၂)ရက်ဖွား၊ နောက်ဘောလုံးစတား ဒီဒီရာ ဒရော့ဘာက (၁၁)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ စတိုးဆိုင်များ ပိုင်ရှင် ဂျွန်ဝါနာမိတ်ကားက (၁၁)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား ဂျူဒ်လောက (၂၉)ရက်ဖွား၊ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် မိုဟာသီယာမိုဟာမက် က (၂ဝ)ရက်ဖွား၊ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ က (၂)ရက်ဖွား၊ ဆိုဗီယက် ယူနီယံနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးခေါင်းဆောင် မီးခေးလ် ဂေါ်ဗာချော့က (၂)ရက်ဖွား၊ ပါကစ္စတန်အကြီးအကဲဟောင်း မူရှာရက်ဖ်က (၁၁)ရက်ဖွား၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် ရာဂျစ်ဂန္ဒီက (၂ဝ)ရက်ဖွား ..ဒါပါဘဲဗျာ။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့3. 12 . 21 . 30 နေ့မွေးသူများ အားလုံး
(3) ဂဏန်း ဟာ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ပိုင်တဲ့ ဂဏန်းဗျ။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ နေစင်္ကြာဝဠာ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ “နေမင်း” ပြီးရင် ဒုတိယအကြီးဆုံးဂြိုဟ် ဖြစ်တယ်ဗျ။ ပြီးတော့ သူက အင်မတန် အားကြီးတဲ့ “သောမ” ဂြိုဟ်ကြီး လည်း ဖြစ်တယ်။ “သောမဂြိုဟ်” ဆိုတာက ဂြိုဟ်ကောင်းပေါ့ဗျာ။ “ပါပဂြိုဟ်” ကတော့ ဂြိုဟ်ဆိုးပေါ့။
နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ မှာတော့ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကောင်း-အပြစ်တစ်သိန်းပျောက် လို့ ဆိုကြတယ်။ ဇာတာခွင်တစ်ခုမှာ ကြာသပတေးဂြိုဟ်သာ အားကောင်းရင် ကျန်တဲ့ အားနည်းချက်၊ အပြစ်တွေ ပျောက်ကုန်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ သူဟာ တရားဥပဒေ၊ ဘာသာရေး၊ အတွေးအခေါ်ဒဿန၊ ငွေကြေးဓနဥစ္စာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ရိုးရာအစဉ်အလာတွေကို စိုးမိုးတယ်ဗျ။
ရောမဒဏ္ဍာရီမှာတော့ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီးဟ “ဂျူပီတာ” ဆိုတဲ့ နတ်ဘုရားရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး သူဟာ “ကောင်းကင်၊ မြေကြီး နဲ့ မိုးကြိုး” တွေကို အစိုးရတဲ့ နတ်မင်းကြီးတစ်ပါးလို့ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ “နတ်အားလုံးတို့ရဲ့ ဘုရင်” လို့ လည်းဆိုပြန်တယ်။ သူဟာ “တရားဥပဒေကို စိုးမိုးတဲ့ နတ်မင်းကြီး” လို့လည်း သတ်မှတ်ကြပြန်တယ်။
ဒါကြောင့် (3)ဂဏန်းသမားတွေဟာ တရားဥပဒေကို ရိုသေလေးစားလိုက်နာသူတွေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းသူတွေ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာတွေကို လိုက်နာလေ့ ရှိသူတွေများတယ်ဗျ။ သူတို့ဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို သိပ်မလိုက်ချင်ကြတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ဝါဒီတွေလည်း ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုတော့ မြတ်နိုးကြတယ်ဗျ။
သိပ်ခေတ်ဆန်လွန်းတာ၊ ခေတ်ရှေ့ပြေးလွန်းတာတွေကိုတော့ သိပ်နှစ်ခြိုက်လေ့မရှိကြဘူး။ စည်းကမ်းလည်း အင်မတန်ကြီး ကြတယ်။ ဇွဲသတ္တိအလွန်ကောင်းပြီး နောက်မလျော့အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ စရိုက်တွေရှိတတ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံး သမ္မတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “အေဘရာဟင်လင်ကွန်း” ဟာ (12)ရက်မွေးတဲ့ (3) ဂဏန်းသမားဘဲဗျ။ သူဟာ တောထဲက သစ်လုံးအိမ်ကလေးထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ဘဝနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး သမ္မတဖြစ်လာသူဘဲ။ နောက်တစ်ယောက်က ဒုတိယယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ နာဇီဂျာမဏီတို့ရဲ့ ရန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံ တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် “ဆာဝင်စတန်ချာချီ” ကလည်း (30)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (3)ဂဏန်းသမားတစ်ဦးဘဲဗျ။
= (3)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဘယ်လိုဘဝ အခြေအနေမျိုးမှာ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာရသည်ဖြစ်စေ နောက်ဆုံးမှာတော့ မြင့်မားတဲ့ ဘဝအခြေအနေကို တက်လှမ်းနိုင် ကြသူများဖြစ်တယ်။ အိုဇာတာ ကောင်းကြသူတွေများတယ်။ ဘဝမှာ အဆင့်မြင့် တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်။ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လွယ်တယ်။ သူတို့ဟာ မွေးကတည်းက “ရာဇ”ယုဂ် ပါလာ ကြသူများဖြစ်ကြတယ်။
(3)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ တည့်တဲ့ ဂဏန်းကလည်း ခပ်ရှားရှားဘဲဗျ။ သင်္ချာဗေဒစာအုပ် တော်တော်များများမှာတော့ (3)ဂဏန်းသမား (3,6,9) ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ သင့်မြတ်ကောင်းမွန်သည်ဆိုတဲ့ အဆိုကိုတော့ ကျွန်တော်သိပ်သဘောမကျလှဘူးဗျ။ (6) ဂဏန်းသမားနဲ့ မိတ်ဘက်ကျတယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံနိုင်ပေမယ့် (9)ဂဏန်း သမားနဲ့ (3)ဂဏန်းသမားတော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ (9)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အတ္တစိတ်ကြီးတတ်တယ်။ အနိုင်ထက် ပြုတတ်တယ်။ သူများကို လွှမ်းမိုးလိုတယ်။ “တရားတစ်ဖက် ဒါးတစ်လက်” ပြုတတ်တယ်။ ဒါတွေဟာ (3)ဂဏန်း သမားတွေနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ ကိစ္စဘဲဗျ။
(3)ဂဏန်းတစ်မျိုးစီရဲ့ သီးခြားဂုဏ်အင်္ဂါလေးတွေကိုလည်း ပြောရရင်
(3)ဂဏန်းလေးမျိုးရှိတယ်ဗျ။ “ထီးတည်း” လို့ခေါ်တဲ့ (3)ရက်ဖွားရယ်၊ (12)ရက်ဖွားရယ်၊ (21)ရက်ဖွားရယ်၊ (30)ရက်ဖွားရယ်ပေါ့။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ (21)ဂဏန်းဘဲဗျ။ (3) ထီးတည်းကတော့ စည်းကမ်း ကြီးလွန်းပြီး အထီးကျန်ဆန်တယ်။ ဒီနေရာ တစ်ခုပြောချင်တာ (1)ကနေ (9) အထိ ဂဏန်း(9)လုံးဟာ တွဲဖက်မရှိလို့ သူတို့ကို “ထီးတည်း” ဂဏန်းတွေလို့ ခေါ်တယ်ဗျ။ ထီးတည်းဂဏန်းမှန်ရင် (5)ဂဏန်းတစ်ခုကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ထီးတည်း ဂဏန်းသမားတွေဟာ အထီးကျန်ဆန်ခြင်း၊ ပေါင်းရသင်းရခက်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေ အနည်းနဲ့အများ ရှိနေကြ သူတွေဘဲဖြစ်တယ်။ (10)ကနေ စပြီး (31) အထိ ဂဏန်းတွေကိုတော့ “တွဲလုံး” ဂဏန်းတွေလို့ခေါ်တယ်။ ဂဏန်းဗေဒင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီအချက်ဟာ သိထားသင့်တယ်။
ကမ္ဘာကျော်ကြားတဲ့ (3) ဂဏန်းသမားတွေ
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ (3) ဂဏန်းသမားတွေကတော့ = အေဘရာဟမ်လင်ကွန်း က (12)ရက်ဖွား ၊ ၀င်စတန်ချာချီက (30)ရက်ဖွား၊ မော်တော်ကားတီထွင်ခဲ့
သူ ဟင်နရီဖို့ဒ် က (30)ရက်ဖွား၊ လူဟာ မျောက်ကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ချားလ်ဒါဝင်က (12)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး မတ်တွိန်းက (30) ရက်ဖွား၊ နိုဘယ်ဆုဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အယ်ဖရက်နိုဘယ် က (21)ရက်ဖွား၊ အခု ကယ်လဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အက်ရှင် မင်းသားကြီး အာနိုးလ်က (30)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးချော ကင်မရွန်းဒဇ် က (30)ရက်ဖွား၊ တိုက်တန်းနစ် သီချင်းနဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားတဲ့ အဆိုတော် ဆယ်လိုင်းဒီယွန် က (30)ရက်ဖွား၊ အောင်ဆန်း-အက်တလီ , နု- အက်တလီ ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကိစ္စမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ကလီးမင့် အက်တလီက (3)ရက်ဖွား၊ နိုဗယ်ဆုရ စာရေးဆရာကြီး အားနက်စ် ဟင်းမင်းဝေးက (21)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး ဂျက်လန်ဒန်က (12)ရက်ဖွား၊ ဖလော်ရင့် နိုက်တင်ဂေးက (12)ရက်ဖွား၊ ချယ်ဆီးတိုက်စစ်မှူး ဖရင့် လမ်းပတ် က(21)ရက်ဖွား၊ ကားမှောက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိုနာကိုမင်းသမီးကြီး ဂရေ့စ်ကယ်လီက (12)ရက်ဖွား၊ ဟောလီဝုဒ် သရုပ်ဆောင်နဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ မဲလ်ဂစ်ဘ်ဆင် က (3)ရက်ဖွား၊ ပြိုင်ကားမောင်းချန်ပီယံ မိုက်ကယ်ရှုးမေကာက (3)ရက်ဖွား၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ကိုရီးယား သမ္မတဟောင်း ပတ်ချုံဟီးလ် က (30)ရက်ဖွား၊ နောက်ထပ်လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ် အိုလော့ပန်း က (30)ရက်ဖွား၊ လက်ရှိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မကြီး အယ်လီဇဘက် က (21)ရက်ဖွား၊ ကမ္ဘာကျော် ကာတွန်းသရုပ်ဆောင် “မောဂ္ဂလိ ” ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ရုယဒ်ကစ်ပလင်းက (30)ရက်ဖွား၊ သိပ္ပံစာရေး ဆရာကြီး H.G Well က (21)ရက်ဖွား၊ ဂျာမန်နာဇီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟာမန်းဂိုးအားရင်းက (12)ရက်ဖွား ပါဗျာ ။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့4. 13 . 22 . 31 နေ့မွေးသူများ အားလုံး (4) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
(4)ဂဏန်းဟာ ဂဏန်းဗေဒင်ပညာမှာ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂဏန်း တစ်ခုပါ။ (4)ဂဏန်းဟာ ပထဝီ၊ ဝါယော၊ အာပေါ၊ တေဇော ဆိုတဲ့ မူလဘူတ ဓါတ်ကြီး (4)ပါးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဂဏန်းပါ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်ဆိုတဲ့ သစ္စာတရားဟာ (4)ပါးရှိပါတယ်။ သမုဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ နဲ့ နိယောဓ သစ္စာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကမှာ “ပညတ်” တရားတွေ ဘယ်လောက် များများ၊ “ပရမတ်” တရားကတော့ (4)ခုသာ ရှိပါတယ်။ “စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ် ၊ နိဗ္ဗာန်” တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (4)ဂဏန်း အတွဲပါဘဲ။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့5. 14 . 23 နေ့မွေးသူများ အားလုံး (5) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
(5)ဂဏန်းဟာ သင်္ချာဗေဒပညာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် စိုးမိုးတဲ့ဂဏန်းဗျ။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို အင်္ဂလိပ်လို Mercury လို့ခေါ်တယ်။ ဂရိ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာတော့ “ဟားမီးစ်” လို့ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်မှာ အတောင်ပံပါတဲ့ ခြေမြန်တော် နတ်သားဟာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရဲ့ အမှတ်အသားပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခု က ပြဒါးကိုလည်း မာကျူရီလို့ဘဲခေါ်တယ်။ ပြဒါးဆိုတာ အဂ္ဂိရတ်သမား တွေအတွက်တော့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ဒြပ်စင်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ ကြားဘူးမှာပေါ့ဗျာ။ ” သံ,သေ၊ တစ်ဆွေဝ၊ ပြဒါးသေ တစ်ပြည်ဝ” တဲ့။
ပြဒါးဟာ အင်မတန်ဆုပ်ကိုင်ဖမ်းယူဖို့ ခက်တယ်။ အလွယ်တကူ ပြန့်ကြဲသွားနိုင်သလို၊ အလွယ်တစ်ကူ ပြန်လည် စုစည်းသွားနိုင်တယ်။ မင်းသားကြီးအားနိုးလ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Terminator (2) လား (3) လားမှာ ပါတဲ့ ပြဒါးလူသားလိုပေါ့ဗျား။ စက်ရုပ်ခြင်းတောင်မှ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်တိုက်ခိုက်ယူရလောက်အောင် စွမ်းအားသတ္တိ ကြီးလှတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် သူက အပူကို သိပ်ကြောက်တယ်။ ပြဒါးကို မီးသာပြလိုက်။ ရွှတ်ကနဲ ပျောက်ထွက်သွားတာဘဲဗျ။ မီးအပူကို သိပ်ကြောက်တယ်။
ဒီလိုဘဲ (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ လွတ်လပ်မှုကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ အချုပ်ချယ်ခံဘဝ၊ သူများလက်အောက်ခံဘဝမှာ နေလိုသူတွေမဟုတ်ဘူး။ မီးအပူကို ကြောက်တဲ့သဘောက ဇွဲသတ္တိဝီရိယ နည်းတဲ့သဘောကို ပြတယ်ဗျ။ (5)ဂဏန်းသမား အတော်များများဟာ ဆင်းရဲပင်ပန်းခံပြီး ရေရှည်လုပ်ရမယ့် အလုပ်မျိုးဆိုရင် မီးနဲ့တွေ့သလို ပြေးတော့တာဘဲဗျို့။ (5)ဂဏန်း သမားတွေဟာ (2)ဂဏန်းသမား တွေလိုဘဲ ဇွဲသတ္တိသိပ်မကောင်းလှဘူးဗျ။ ရှေရှည် စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေထက်
တစ်ပွဲတိုး ဖြတ်လမ်းနည်းတွေနဲ့ ကြီးပွားလိုချင်တတ်ကြတယ်။ ဝီရိယထက် ဉာဏ်ကို ပိုမိုအားကိုး လိုသူတွေဖြစ်တယ်။ ဉာဏ်ကလည်း အလွန်ကောင်းတတ်ကြတယ်ဗျို့။ (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ တင်္ခနုပ္ပတိ လို့ခေါ်တဲ့ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်းတယ်။ အာဝဇ္ဇန်းကောင်းတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး အလွန်ပြေပြစ်တယ်။ ဘယ်လို လူမျိုးနဲ့မဆိုတည့်အောင်
ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အယ်လ်ဘတ်အိုင်စတိုင်း ဟာဆိုရင် မတ်လ (14)ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့ (5)ဂဏန်းသမားဖြစ်ပြီး မတ်လ(14)ရက်နေ့ဟာ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ပိုင်တဲ့ မိန်ရာသီထဲမှာ ကျရောက်နေလို့ သူ့ကျတော့ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရော၊ ကြာသပတေး ဂြိုဟ်ပါ စိုးမိုးခံရသူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ သိပ္ပံပညာ သာမက၊ အဘိဓမ္မာဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သွားပါတယ်။
(5)ဂဏန်းဟာ လူသားအင်မတန်ဆန်တဲ့ဂဏန်းဖြစ်ပြီး လူ ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါနဲ့ အင်မတန်နီးစပ်တဲ့ဂဏန်းဖြစ်တယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းတွေဟာ တစ်ဘက်ကို (၅)ချောင်းစီ ပါနေတာရယ်၊ အာရုံခံစားနိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ် ဟာလည်း မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ် ဆိုပြီး (၅)မျိုးရှိတာရယ်။ တရားသဘောအရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်ရင် လူဆိုတာ “ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိဉာဏ်” ဆိုတဲ့ “ခန္ဓာ(၅)ပါး” အစုအဝေးသာဖြစ်တာရယ်၊ သာမန်လူသားတွေ စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ သီလဟာ (၅)ပါးအပြား သာရှိတာရယ်၊ အနန္တော အနန္တ (၅)ငါးပါးဟာ အကြီးအကဲဂိုဏ်းဝင်တွေ ဖြစ်တယ် ရယ်ဟာ လူသားဆိုတဲ့ ပညတ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး သင်္ကေတတွေပါဘဲ။ နောက်တစ်ခုဟာ သင်္ချာဗေဒမှာ (1) ကနေ (9) အထိ ဂဏန်း (၉)ခုရှိတဲ့ အထဲမှာ (5)ဂဏန်းဟာ အလယ်ဗဟိုကျနေတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ရှေ့မှာ ဂဏန်း (၄)လုံးရှိတယ်။ နောက်မှာ ဂဏန်း (၄)လုံးရှိတယ်။ သူက အလည်မှာ တံတားသဘောမျိုး ပေါင်းကူးပေးထားတာ မျိုးဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါမျှတညီညွတ်အောင် ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့် (5)ဂဏန်းသမားနဲ့ မတည့်တဲ့ ဂဏန်းမရှိသလောက်ဘဲ။ စိတ်ထဲက ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ အားလုံးနဲ့ သင့်တင်အောင် ပေါင်းနိုင်ကြတယ်။ သူဟာ ဆက်သွယ်ရေးပေါင်းကူးဂြိုဟ်ဖြစ်နေတော့ (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ သတင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စာနယ်ဇင်း၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာ၊ တီဗွီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဂရိနတ်တွေထဲမှာ မာကြူရီနတ်သားဟာ ခြေထောက်မှာ အတောင်ပံပါတဲ့ ခြေမြန်တော်နတ်သားဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ဟာ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းဖြန့်ချိရေး၊ ကူးလူး ဆက်ဆံရေး၊ သံခင်းတမန်ခင်းကိစ္စတွေရဲ့ အမှတ်အသား တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။
(5)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ ယေဘူယျ သရုပ်အမှန်များ
ငါးဂဏန်းသမားတွေဟာ ဉာဏ်ကောင်းပြီး၊ ဝီရိယနည်းသူ
တွေဖြစ်တယ်။ လောကဓံတရားကို ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။
ရေရှည်ဇွဲသတ္တိနည်းတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းတတ်တယ်။ ကိုယ်မနှစ်သက်ရင်တောင် အလွန်အတိုက်အခံပြုခဲတယ်။ ရန်ကို ရှောင်ရှားတတ်တယ်။ နှုတ်သွက်တယ်။ စကားပြောကောင်းတယ်။ အာဝဇ္ဇန်း ကောင်းတယ်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းတယ်။ သူတစ်ပါးအပေါ် လွှမ်းမိုးလိုစိတ်နည်းတယ်။ အမိန့်သြဇာပေးလိုမှု နည်းတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတယ်။ ဒါကြောင့် (5)ဂဏန်းသမား အာဏာရှင်ဖြစ်တာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ (5)ဂဏန်း သမားတွေထဲမှာ ဘုရင်တွေ၊ ဘုရင်မတွေ ရှိပေမယ့် သူတို့ဟာ မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်အရဖြစ်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့လက်ထက်မှာ လည်း ဖိနှိပ်မှုတွေ သိပ်နည်းပါတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့ဟာ အသုံးအစွဲကြီးပြီး လက်ဖွာသူများဖြစ်တယ်။ သူများကိုလည်း အလွယ်တကူ စွန့်ကြဲပေးကမ်း တတ်ကြတယ်။ အကောင်းစား ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို ခုံမင်နှစ်သက်တတ် တယ်။ သူတို့ဟာ မရှိလည်းပျော်ပျော်၊ ရှိလည်း ပျော်ပျော် နေတတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ စည်းကမ်းသေဝတ်မှု နည်းတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ဗရမ်းဗတာ နေတတ်ထိုင်တတ်တာမျိုး တွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဉာဏ်ကောင်း၊ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းပေမယ့် စီမံခန့်ခွဲမှုမှာတော့ အားနည်းညံ့ဖျင်း တတ်သူတွေ ဖြစ်တယ်။
(5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးလည်းကောင်း၊ အပေါင်းအသင်းလည်းများ၊ စကားပြောလည်း ကောင်းတတ် သူတွေဖြစ်လို့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် တွေရဲ့ သဘောကျမှုကို ခံရတတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စတွေ ရှုတ်ထွေး တတ်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်မကျခင်မှာ အချစ်ရေးရှုတ်ထွေးပြီး ရည်းစားများ တတ်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။
ယေဘူယျပြောရရင်တော့ (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းတတ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေး (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်း တတ်တယ်။ သူတို့အိမ်ထောင်ဘက်ဟာ လူအေး၊ လူဖြောင့်တွေ ဖြစ်တာ များတယ်။ အထူးသဖြင့် (23)ရက်ဖွား မိန်းကလေး တွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကောင်းတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရတတ်တယ် (ဒါမှမဟုတ်)ကိုယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကြီးပွားချမ်းသာလာတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တွေဟာ အေးစက်စက်နိုင် ကြသူများဖြစ်လို့ ဒီအပေါ်မှာ ကျေနပ်မှု မရနိုင်ကြတာ မျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။
(5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်မှတ်ကြီးသူတွေ မဟုတ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ်သူများဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက် စော်ကား ခံရခံရ ခဏလောက်ဘဲ ဒေါသဖြစ်၊ ပေါက်ကွဲတတ်ကြပြီး လွယ်လွယ် နဲ့ ပြီးပျောက်သွားကြ သူများဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဂဏန်းတွေကတော့ (2)ဂဏန်း၊ (5)ဂဏန်း၊ (7) ဂဏန်း နဲ့ (8)ဂဏန်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ ဂဏန်းအားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေညီညွတ်အောင် ပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ (5)ဂဏန်း သမားတွေဟာ (2)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာကို အများဆုံး တွေ့ရတတ်တယ်။
(5)ဂဏန်းသမားတွေထဲမှာ (5) ထီးတည်းသမားတွေဟာ အားလုံးနဲ့ ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး၊ လွတ်လပ်မှုကို ပိုမို မြတ်နိုးတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတယ်။ ရက်ရောသဘောကောင်းမှုများတယ်။ စွန့်ကြဲပေးကမ်း လွယ်တယ်။ “ပျော်ပျော်နေသေခဲဝါဒ” ကို ကျင့်သုံးတတ်သူများဖြစ်တယ်။ အထက်တန်းကျကျ နေလိုတတ်ကြတယ်။ အပျော်ကြူးတတ်မှု တွေ ရှိနိုင်တာကိုတော့ သတိပြုသင့်တယ်။
(14)ဂဏန်းသမားတွေကျတော့ ထက်မြက်မှုရှိပြီး၊ အုပ်ချုပ်သူသြဇာအာဏာရှိသူများနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် လွယ်တတ်ကြသူများ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့မိမိဘဝတက်လမ်းကို ရှာကြံနိုင်တတ် ကြတယ်။ တနင်္ဂနွေ(1)ဂဏန်း နဲ့ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် (4)ဂဏန်းပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ကျန်တဲ့ (5)ဂဏန်းတွေထက် ပိုမိုထက်မြက်ပြီး သြဇာ နဲနဲ ပေးချင်တဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ပါနေတဲ့အတွက် သူတို့ဟာ လောကဓံတွေကို မကြာခဏကြုံရတတ်တယ်။ ရန်အတိုက်အခံပိုများတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ လူကောင်းလူဖြောင့်တွေဖြစ်ပြီး အပေါင်း အသင်းများအပေါ်မှာ အနစ်နာ ခံပြီးပေါင်းတတ်ကြတယ်။ ခင်မင်မိပြီဆိုရင် အစွမ်းကုန် ကူညီတတ်ကြလေ့ရှိသူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ နောက်က Current of Destiny ခေါ်တဲ့ မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဂဏန်း မကောင်းရင် ဥပစ္ဆေဒကံ ရှိသူများဖြစ်တယ်။
(23)ဂဏန်းသမားတွေကျတော့ ဂဏန်းအားလုံးထဲမှာ ဘုရင်ဆိုလောက်တဲ့ဂဏန်းဖြစ်တယ်။ (23)ရက်ဖွားဟူသမျှ ကောင်းစား ကြတာများတယ်။ မိန်းကလေးဆိုရင် ပိုကောင်းစား တတ်တယ်။ လင်ကောင်းသားကောင်းရတတ်တယ်။ (23)ရက်ဖွား ယောင်္ကျားများ ကြပြန်တော့ ကံကြမ္မာရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှု ကို ရတတ်ပြီး ဘ၀တက်လမ်း အလွန်မြန်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် (23)ဂဏန်းဟာ တနင်္လာဂြိုဟ် နဲ့ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ “စန္ဒြဂုရု” ယုဂ်ရတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်လို့ ကိုယ်ကျင့် တရားကောင်းဖို့လိုတယ်။ (23)သမားတွေဟာ ကံကောင်းနေရာက ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ထက် ပြုနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်း စတဲ့ ဒုစရိုက်တွေကို ကျူးလွန်မိရင် ကံတရားက ချက်ခြင်းအပြစ်ပေး ခံရတတ်ပြီး အောက်ဆုံးကို ပြုတ်ကျ သွားတတ်တာကို သတိထားပါ။ (23)ဂဏန်းဟာ (5) , (14)ဂဏန်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အတ္တစိတ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ် ပိုများတတ်တယ်။ ကပ်စေးပို နဲတတ်တယ်။ ရက်ရောမိရင်လည်း သူမတူအောင် ရက်ရောတတ်သလို၊ ကပ်စေးနှဲမိရင်လည်း သူမတူအောင်ဖြစ်တတ်တယ်။
ကိုသိန်းဖေရေ – နောက်ဆုံးခြုံပြောရရင် (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ပြဒါးကို သေအောင်သတ်ဖို့ မလွယ်သလို၊ သူတို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လွယ်သူတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။ (5)ဂဏန်းသမား လူဆိုးဖြစ်မိရင် ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့ကြိုးစားမနေနဲ့။ သူ့ဟာသူ ပြန်ကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ သူများဆုံးမလို့တော့ နောင်တရမယ် မထင်နဲ့။ (5)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေ တွေဗျ။ သူ့ကို တရားသွားမဟောနဲ့ သူကပြန်ဟောပြလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ လောကကြီးအကြောင်းကို နောကြေနေအောင် သိကြသူတွေ ဖြစ်တွေလို့ သူတို့ကို ဆရာလုပ်လို့ မလွယ်လှပါဘူး။
အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးနဲ့ ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ် ဂျဝါဟလာနေရူး က (23)ရက်ဖွား၊ နပိုလီယံအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မိဘုရားကြီး ဂျိုဆက်ဖင်က (23)ရက်ဖွား၊ လေရူးသုန်သုန် ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့
ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီးချော ဗီဗီယံလေးက (5)ရက်ဖွား၊ မင်းသားကြီး ဂရေဂိုရီပတ်က (5)ရက်ဖွား၊ ဂျော့ဘုရင် နံပါတ်(6)က (14)ရက်ဖွား၊ ချက်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတ စာပေနဲ့ကဗျာပညာရှင် ဗားကလက်ဟေဗယ်က (5)ရက်ဖွား၊ ဂျော်ဒန်ဘုရင်ဟူစိန်က (14)ရက်ဖွား၊ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား ရော်ဂျာမိုးက (14)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောလင်းပါဝယ်က (5)ရက်ဖွား၊ ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် က (14)ရက်ဖွား၊ ဘောလုံးသမား ဟာနန်ခရက်စ်ပိုက (5)ရက်ဖွား၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး နက္ခတ်သင်္ချာစွယ်စုံပညာရှင် ရာဖေးလ် က (5)ရက်ဖွား၊ Dell ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ဒဲလ် က (23)ရက်ဖွား၊ ဘီလျံနာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က (14)ရက်ဖွား၊ အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ချီဂွေဗားရား က (14)ရက်ဖွား၊ ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း အလီဘူတို (ဘင်နာဇီယာဘူတို၏ဖခင်) က (5)ရက်ဖွား၊ ကာတွန်းပညာရှင်ကြီး ဝေါ့လ်ဒစ်နေး က (5)ရက်ဖွား၊ ကွန်မျူနစ်ဝါဒရဲ့ ဖခင်ကြီး ကားလ်မတ်ခ် က (5)ရက်ဖွား၊ ဗြိတိသျှ အိမ်ရှေ့စံ ချားလ်မင်းသားက (14)ရက်ဖွားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့6. 15 . 24 နေ့မွေးသူများ အားလုံး (6) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
(6)ဂဏန်းဟာ ထူးခြားတယ်ဗျ။ (1) ကနေ (9)အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဂဏန်းအားလုံးထဲမှာ “အငြိမ်သက်ဆုံး” ဂဏန်းတစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်ဗျ။
(6)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာ နေလို သူတွေ ဖြစ်တယ်။ မေတ္တာတရားကြီးမားကြတယ်။ သူ့ဟာသူထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာရင်တော့ ကျော်ကြားမယ်။ ကျော်ကြားမှုကို လုပ်မယူတတ်ကြဘူး။ ခေါင်းဆောင်နေရာကို အတင်းလု မယူလိုကြဘူး။ ကျရာ တာဝန်ကိုဘဲ ထမ်းချင်ကြတယ်။ လူတွေက ခေါင်းဆောင်နေရာ
တင်ပေးမှ လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ထင်ထင် ပေါ်ပေါ် သိပ်မတွေ့ရတာဘဲဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက (6)ရယ်၊ (15)ရယ်၊ (24)ရယ် ဂဏန်း (၃)မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာလည်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ သိပ်မဆင်တူကြဘူးဗျ။ သီးခြား ဂုဏ်အင်္ဂါ စရိုက်တွေ ရှိနေကြတာကိုလည်း သွားတွေ့ရတယ်။(6)ဂဏန်းမှာက တစ်မျိုး ၊ (15)ဂဏန်းမှာက တစ်မျိုး (24)ဂဏန်းမှာက တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ တစ်မျိုးစီ ကွဲပြား
နေကြတယ်။ ယေဘူယျ တူတဲ့အချက်က နည်းတယ်ပါတယ်။
(6)ဂဏန်းအကြောင်းပြောရင် သောကြာဂြိုဟ်အကြောင်းစ,ပြောမှဖြစ်မယ်။ (6)ဂဏန်းဟာ နေစင်္ကြာဝဠာထဲမှာ ဗီးနပ်စ် လို့ခေါ်တဲ့
သောကြာဂြိုဟ်မင်းရဲ့ အမှတ်အသားပေါ့ဗျာ။ သူဟာ နေမင်းအနီးမှာ အမြဲကပ်လျှက် တည်ရှိ နေတတ်ပြီး ညနေခင်း နေ၀င်ချိန်နဲ့ နံနက် အရုဏ်တက်ချိန်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ မိုးသောက်ကြယ် ဆိုတာလည်း သူပါဘဲ။ နေ၀င်ကြယ်ဆိုတာလည်း သူပါ ဘဲ။ ဂြိုဟ်အားလုံးထဲမှာ အတောက်ပြောင်ဆုံး နဲ့ အထင်ရှားဆုံး လည်းဖြစ်တယ်။ ဂရိလူမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီအရ သောကြာဂြိုဟ် ဗီးနပ်စ်ဟာ အလှနတ် ဘုရားမ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သင်္ကေတဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တယ်။
သောကြာဂြိုဟ် ၊ (6)ဂဏန်း နှင့် အမျိုးသမီးများကို ကိုယ်စားပြုသော သင်္ကေတ
သောကြာဂြိုဟ်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တဏှာပေမ၊ အနုပညာရပ်များ၊ အလှအပတရား၊ သဘာဝတရား၊ မိခင်ဆန်ခြင်း၊ လောကစည်းစိမ်နဲ့ နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ အာရုံခံစားမှု တွေရဲ့ သင်္ကေတ လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် (6)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အနုပညာကို ခံစားထိသိလွယ်သူတွေဖြစ်ပြီး နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့ စိတ်ရှိကြတာများတယ်။
သူတို့ဟာ အရာရာမှာ နရီစည်းဝါးကျခြင်း(Hermony)၊ အစီအစဉ်ကျနခြင်း(Order)၊ ငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်ခြင်း (Peace) များကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင် အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင် အနုပညာရပ်များကို မြတ်နိုး တတ်ကြသူများ ဖြစ်တယ်။ ဖရိုဖရဲဖြစ်ခြင်း၊ ဆူပူခြင်း၊ ဗရမ်းဗတာဖြစ်ခြင်းများကို
မိမိ မိသားစုနဲ့နေအိမ် အပေါ်မှာ ခင်တွယ် မြတ်နိုးတတ်ကြပြီး မိမိရဲ့ နေအိမ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလည်း ထာဝစဉ် လှပနေကြ စေလိုသူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကို မြတ်နိုးကြသူများဖြစ်ပြီး တကယ် လိုအပ်လာရင် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ၀န်မလေးကြသူ များဖြစ်တယ်။
(6)ဂဏန်းသမားတွေကို ပန်းချီ ပန်းပု သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ အဖြစ် တွေ့မြင်ရတတ်သလို လူ့လောကကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့ နဲ့၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု များအောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေသူများအဖြစ်လည်း တွေ့ရတတ်တယ်။ သူတို့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာလည်း ဆူပူလိုခြင်း၊ အကြမ်းဖက်လိုခြင်း၊ အာဏာရယူလိုခြင်းများ အတွက် မဟုတ်ဘဲ လူ့လောကကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာစေဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် (6)ဂဏန်းသမားတွေထဲမှာ ကမ္ဘာကျော် မိုနာလီဇာ ပန်းချီကားကြီးကို ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ လီယိုနာ ဒိုဒါဗင်ချီ၊ ပန်းချီပန်းပုပညာရှင် မိုက်ကယ်အိန်ဂျလို၊ စာရေးဆရာမကြီး အာဂါသာ ခရစ္စတီး၊ မွန်တီခရစ္စတိုဖာနယ်စားကြီး၏ ရတနာသိုက် ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ၀တ္တုကြီးကိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး အလက်ဇန်းဒါး ဒူးမား၊ စာရေးဆရာကြီး ဆာဝေါ်လတာ စကော့ တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိသလို။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး အာဇာနည် သူရဲကောင်းမလေး ဂျူန်းအော့အာ့ခ် ၊ ပါလက်စတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ရာဆာအာရာဖတ်၊ အမေရိကန် လူမည်းတို့ ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မာတင်လူသာကင်း တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။
(6)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ထားနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသူတွေ မေတ္တာတရားကြီးကြသူတွေဖြစ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ရင်သော်မှ စိတ်ထားအနူးညံ့ဆုံး၊ သဘောထားအကြီးဆုံး ဖြစ်တတ်တာကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ နာဇီဂျာမဏီ စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “အာဝင်ရွန်းမဲလ်” က သက်သေခံနေပါတယ်။
အာဝင်ရွန်းမဲလ်ဟာ နာဇီစစ်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်သဘောထားအကြီးဆုံး၊ စစ်တိုက်တာကလွဲပြီး ဂျူးလူမျိုးတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ညှင်းဆဲ ရာမှာ မပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အာဏာရှင် ဟစ်တလာကို အာခံခဲ့လို့ သေဒဏ်အပေးခံရတဲ့ အထိအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ သူဟာ (15)ရက်ဖွား (6)ဂဏန်းသမားဖြစ်ပါတယ်။
(6)ဂဏန်းသမား (၃)မျိုးရဲ့ သီးခြား ဂုဏ်အင်္ဂါတွေကတော့
အနုပညာ ဗီဇစိတ်နဲ့ မြတ်နိုးမှုကတော့ (6)ဂဏန်းသမားတိုင်း ရှိနေလို့ ဒါကိုတော့ အထူးမပြောလိုဘူး။ ထီးတည်းဂဏန်း လို့ ခေါ်တဲ့ (6)ရက်နေ့ မွေးတဲ့ (6)ဂဏန်းသမား များဟာ ကျန်(6)ဂဏန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား ပိုမိုများပြားသူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ခင်မင် နှစ်လိုဘွယ်ကောင်းတဲ့ ဥပတိရုပ် မျိုးတွေ ရှိတတ် ကြတယ်။ သူများတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို အမြဲတန်းကူညီ ဖြေရှင်းလိုကြသူများဖြစ်တယ်။
လူတစ်ဖက်သား အပေါ်မှာ အလွန်စိတ်ချယုံကြည်လွယ်သူများဖြစ်တယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သူတို့အပေါ် အမြတ်ထုတ် သွားမှုမျိုး တွေကိုလည်း ဘ၀မှာ အမြဲခံကြ ရတတ်တယ်။ သူတို့ဟာ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများအပေါ်မှာ အလွန်ခင်မင်ပြီး သစ္စာရှိတတ် ကြသူများဖြစ်တယ်။ အရေးကြုံရင် ကူညီဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့အပေါ်မှာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ကူညီမှုများကတော့ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ဟာ နိမ့်မြင့် တက်ကျ သိပ်မရှိလှဘဲ ငြိမ်သက် လွန်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို သင်္ချာဗေဒပညာကို သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဖြစ်သူ ဆရာဦးဝင်းမြင့်သိန်း (ဆင်ဖြူကျွန်း) က ထီးတည်း (6)ဂဏန်းသမားများကို “ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုနဲ့ ငြိမ်သက်နေကြ သူများ” လို့ ကင်ပွန်းတပ်ထားပါတယ်။ သူတို့ဘ၀မှာ အခြား သူတွေ မသိတဲ့၊ အခြားသူတွေ မသိစေချင်တဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်း မှုတွေ ရှိတတ်ပြီး၊ ဒါကိုလည်း ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားကြရသူများလို့ ဆိုပါတယ်။
(15)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (6)ဂဏန်းသမားများကျပြန်တော့လည်း တစ်မျိုးတစ်ဘာသာပါဘဲ။ သူတို့ဟာ တစ်ကယ့် အချစ်စစ် ကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြသူများ ဖြစ်တယ်။ အလှအပတရားကို အလွန်မြတ်နိုးကြတယ်။ မိသားစုဘ၀ကိုလည်း ခင်တွယ်မြတ်နိုး တတ်သလို သဘာဝလောကကြီးကိုလည်း ခင်တွယ်မြတ်နိုး တတ်ကြသူများဖြစ်တယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ် ကြသူများလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ သားသမီးများအပေါ်မှာလည်း အလွန်ချစ်ခင် မြတ်နိုးတတ်ကြသူများဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် (15)ရက်ဖွား အတော် များများဟာ ကိုယ်ပေးဆပ် သလောက် ပြန်မရကြတာ ပိုများပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး မှာ အလွန်အနစ်နာ ခံကြရသူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ သောကြာဂြိုဟ် စိုးမိုးမှုအောက်မှာ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် Taro-Numerology ပညာအရ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတာက စနေဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (15)ရက်ဖွားများဟာ Current of Destiny မကောင်းရင် ဥပစ္ဆေဒက ကံ သင့်တတ် ကြသူများဖြစ်တာကိုတော့ အထူးသတိထားရပါမယ်။
(24)ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့ (6)ဂဏန်းသမားများကျတော့လည်း စိတ်ထားခက်ထန်ကြသူများလို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် ကြီးပွား တိုးတက်လိုစိတ်၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လိုစိတ်များ ရှိတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလွန်သွက်လက်၊ ဖြတ်လတ် ကြသူများ (Super Active)များ ဖြစ်တယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဥပတိရုပ်မျိုး ရှိကြသူများ ဖြစ်တယ်။
ထက်မြက်ပြတ်သားပြီး ခေါင်းဆောင်အရည်အသွေးရှိသူများဖြစ်တယ်။ စည်းရုံးရေး အလွန်ကောင်းပြီး လူအများကို ကိုယ့်ဖက် ပါလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြသူများဖြစ်တယ်။ စည်းရုံးရေးကောင်းသလို စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးလည်း အလွန် ကောင်းတတ် ကြတယ်။
(24)ဂဏန်းသမားတွေကို အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအဖြစ် အများအပြား တွေ့ရ တတ်တယ်။ လိင်ကိစ္စကို စိတ်အားထက်သန် တတ်ကြပြီး အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင် ရေး ရှုတ်ထွေးမှုတွေ များတတ်တယ်။ တစ်ခြား (6)ဂဏန်းသမားများထက် စာရင် သူတို့ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်ချင်တဲ့ သဘောမျိုး၊ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ သဘောထားမျိုး ရှိတတ်ကြတယ်။
(6)ဂဏန်းသမားများနဲ့ ဘဝ အကျိုးပေး လုပ်ငန်းများ
(6)ဂဏန်း သမားများဟာ (2)ဂဏန်း၊ (3)ဂဏန်း၊ (6)ဂဏန်း၊ (9)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ သင့်မြတ်ပြီး (5)ဂဏန်း (7)ဂဏန်း သမားတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်လို့ ရပါတယ်။ (1)ဂဏန်း (4)ဂဏန်း နဲ့ (8)ဂဏန်း သမားတွေနဲ့ အဆင်မပြေတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့နဲ့ အကျိုးပေးတဲ့ အလုပ်တွေကတော့ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဂီတ၊ သရုပ်ဆောင် ၊ မော်ဒယ် စတဲ့ အနုပညာရပ်အမျိုးမျိုး၊ စာပေ ရေးသားခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား သင်ကြားခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကလေး သူငယ် နှင့် ဝေဒနာရှင်များအား
ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ အ၀တ်အထည် ဒီဇိုင်းပညာရှင်၊ အမျိုးသမီး အလှအပ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသမီး အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ စတိုးဆိုင် လုပ်ငန်းတွေ အကျိုးပေးပါတယ်။ သောကြာဂြိုဟ်ဟာ မိန်းမသားတွေကို စိုးမိုးတဲ့ဂြိုဟ်ဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းမှန်သမျှ အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် (6)ဂဏန်းသမားများကတော့ – ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ သိပ္ပံပညာ စွယ်စုံရတဲ့ မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုက (6)ရက်ဖွား၊ မိုနာလီဇာပန်းချီကား ဖန်တီးရှင် လီယိုနာ ဒိုဒါဗင်ချီက (15)ရက်ဖွား၊ နက္ခတ်ပညာရှင် ၀ီလီယံ ဟာရှဲလ် က (15)ရက်ဖွား၊ နက္ခတ်တာရာကြည့်မှန်ပြောင်းကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဂလီလီယိုက (15)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘ၀ကနေ သမ္မတ ဖြစ်လာသူ ရော်နယ်ရီဂင်က (6)ရက်ဖွား၊ ဆိုဗီယက် ယူနီယံ KGB အကြီးအကဲဟောင်း ယူရီ အင်ဒရိုပေါ့ဗ်က (15)ရက်ဖွား၊ ပါလက်စတိုင်း လွတ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင် ရာဆာအာရာဖတ် က(24)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် တီထွင်သူနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဟောင်းဝပ်ဟူးက (24)ရက်ဖွား၊ Apple ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ စတီဗင်ပေါလ်ဂျော့ က (24)ရက်ဖွား၊ ဂေါ့ဒ်ဖားသားဝတ္တုကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး မာရီယိုပူဇို က (15)ရက်ဖွား၊ အဆိုတော် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်က (24)ရက်ဖွား၊ ပြင်သစ် အာဇာနည် သူရဲကောင်း မလေး ဂျူန်းအော့အာ့ခ် က (6)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာမကြီး အာဂါသာ ခရစ္စတီးက (15)ရက်ဖွား၊ ဘောလုံးစတား ရော်ဗင်ဗန်ပါစီ က (6)ရက်ဖွား၊ မင်းသားကြီး ဆီဗက်စတာ စတားလုံးက (6)ရက်ဖွား၊ အီရန်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် အယာတိုလာ ခိုမေနီက (24) ရက်ဖွား၊ နပိုလီယံ ဘိုနာပတ်က (15)ရက်ဖွား၊ လူမည်းခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်း က (15)ရက်ဖွား၊ ဂျာမန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အာဝင်ရွန်းမဲက (15)ရက်ဖွား၊ စိတ်သရုပ်ခွဲပညာရှင် ဒေါက်တာ ဆစ်ဂမန်ဖရွိုက်က (6)ရက်ဖွား၊ Lawrence of Arabia လို့ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တီအီးလောရင့်စ် က (15)ရက်ဖွား၊ ကမ္ဘာကျော် မိတ္တဗလဋီကာ နဲ့ သောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေး ကျမ်းကြီးတွေကို ပြုစုခဲ့တဲ့ ဒေးလ်ကာနက်ဂျီက (24)ရက်ဖွား၊ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မိမိပိုင် ငွေအားလုံးကို လှူဒါန်း ပစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သံမဏိသူဌေးကြီး အင်ဒရူးကာနယ်ဂျီက (24)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး အလက်ဇန်းဒါးဒူးမားက (24)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး ဆာဝေါ်လတာ စကော့က (6)ရက်ဖွား အသီးသီးဖြစ်ကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့7. 16 . 25 နေ့မွေးသူများ အားလုံး (7) ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
(7)ဂဏန်းဟာ ဂရိလူမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီမှာ “ပိုဆီဒွန်” (Posiedon) လို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်နတ်ဘုရားရဲ့ အမှတ်အသား ဂဏန်းဘဲဗျ။ ဂရိတွေက “ပိုဆီဒွန်” ခေါ်ကြတဲ့ နတ်ဘုရားကို ရောမလူမျိုးတွေက “နက်ပကျွန်း” လို့ ခေါ်ဝေါ် ကြပြန်သဗျ။ ပိုဆီဒွန်နတ်ဘုရားဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကို ပိုင်စိုးတဲ့ နတ်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပြီး၊ သူဟာ “ပင်လယ်မုန်တိုင်း” “ငလျှင်” နဲ့ “မြင်း” တွေကို ပိုင်စိုးတယ်လို့ ယူဆကြတယ်ဗျ။ ရှေးအခါတုန်း ကတော့ ပင်လယ် မုန်တိုင်းတွေ နဲ့ ငလျှင်လှုပ်ခြင်း တွေဟာ ပိုဆီဒွန် နတ်ဘုရား အမျက်ဒေါသထွက်လို့ဖြစ်ရတာလို့ ယူဆကြတယ်ဗျ။
(7)ဂဏန်းရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ ရက်သတ္တပါတ် တစ်ခုမှာ
နေ့(၇)နေ့ရှိတာရယ်၊ လ,ဟာ (၇)ရက်တစ်ကြိမ် လဆန်းခြင်း၊ လဆုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပုံမှန်စက်ဝန်း အတိုင်းလည်ပတ်နေတာရယ်၊ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဒွါယ (၉)ပေါက်ရှိတဲ့အနက် (၇)ပေါက်ဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ ဦးခေါင်းမှာဘဲ ရှိနေတာရယ်၊ ဂီတသီချင်းမှန်သမျှ “ဒို၊ ရေ၊ မီ၊ ဖာ၊ ဆို၊ လာ၊ တီ” ဆိုတဲ့ သံစဉ် (၇) ပါးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာရယ်၊ သက်တန့်မှာ ရောင်စဉ် (၇)ပါးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာရယ်၊ ကမ္ဘာရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှာ အံ့ဘွယ်နေရာဌာနတွေကို (၇)ပါး၊ (၇)နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာတွေဟာ (7)ဂဏန်းရဲ့ ထူးခြားချက်တွေ ပေါ့ဗျာ။
ကလေးတွေဟာ လ,မစေ့ဘဲ မွေးတဲ့အခါမှာ (8)လ,ထဲမှာဆိုရင် အသက်မရှင်ဘဲ (7)လ,ထဲမှာ ဆိုရင် အသက်ရှင်တယ် ။ ဒါဟာ (7)ဂဏန်း ဟာ ရှင်သန်ခြင်း အမှတ်အသားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက္ခဏာဘဲဗျ။ သင်္ချာဗေဒ ပညာရှင်တွေကတော့ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ (1846) ခုနှစ် မတိုင်မှီအထိ (7)ဂဏန်းကို တနင်္လာဂြိုဟ်(လမင်း)ရဲ့ စိုးမိုးမှုအောက်မှာ ထားရှိခဲ့ကြတယ်ဗျ။ (2)ဂဏန်းကို တနင်္လာ အမဓာတ် (-) လို့ သတ်မှတ်ပြီး (7)ဂဏန်းကိုတော့ တနင်္လာအဖိုဓာတ်(+)လို့ သတ်မှတ်ထားရှိ ခဲ့ကြတယ်။ (1846)ခုနှစ်မှာ နက္ခတ်ပညာရှင်(၃)ဦးအဖွဲ့က နက်ပကျွန်း ဂြိုဟ်ကြီးကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သင်္ချာဗေဒပညာရှင်တွေက (7)ဂဏန်းကို နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ရဲ့ စိုးမိုးမှုအောက်ကို သွတ်သွင်းလိုက်ကြပြီး ရာသီခွင်မှာတော့ ယခင် ကြာသတေးဂြိုဟ်ပိုင်ခဲ့ တဲ့ “မိန်ရာသီ” ကို အပိုင်စားပေးလိုက် ကြတယ်ဗျ။
မိန်ရာသီဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကို စိုးမိုးတဲ့ရာသီဖြစ်လို့ (7)ဂဏန်းကို မိန်ရာသီကို အပိုင်စားပေးလိုက်တာ သဘာဝကျပါတယ်ဗျာ။
(7)ဂဏန်းဟာ တနင်္လာဂြိုဟ်ပိုင်တဲ့ (2)ဂဏန်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အချက်တွေရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါက (7)ဂဏန်း သမားတွေဟာ (2)ဂဏန်းသမားတွေလိုဘဲ စိတ်ကူးဉာဏ် ကွန့်မြူးမှု အားကောင်း ကြတယ်ဗျ။ တီထွင်ဖန်တီးတတ်တဲ့ ဦးနှောက်မျိုးရှိတယ်။
တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု အားကောင်းတယ်။ အနာဂါတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ မိသားစုဘ၀ကို မြတ်နိုးပြီး အကောင်းမြင် ၀ါဒလည်း ရှိကြတယ်ဗျ။ (2)ဂဏန်းသမားတွေထက် သာတဲ့အချက်က စိတ်ကူး စိတ်သန်း တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှ (2)ဂဏန်းသမားက နှောင့်နှေးပြီး လေထဲအိမ် ဆောက်ကြတာ ပိုများတယ်။ (7)ဂဏန်း သမားတွေကတော့ မြန်မြန် ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ထက်တယ်ဗျို့။ နောက်ပြီး မဆုတ်မနစ် လုပ်ကိုင် တတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း (2)ဂဏန်းသမားထက် သာတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ လေးတွေ ချရေးကြည့်ရအောင်ဗျာ။
= (7)ဂဏန်းသမားတွေဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းခြင်း၊ အတွေးအခေါ်မြင့်မားခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးတတ်ခြင်း၊ ဇွဲကောင်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံ တတ်သော် လည်း စည်းကမ်းစနစ် ကျနကျသူများ မဟုတ်ဘဲ ကပျစ်ကညစ် နေတတ်ကြသူက များပါတယ်။ သူတို့ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်သူများ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြပေမယ့် ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းလိုစိတ်နည်းပါးကြသူများဖြစ်တယ်။
တစ်ခုအောင်မြင်သွားရင် နောက်တစ်ခုကို ခြေလှမ်းပြင် နေတတ်ကြသူများဖြစ်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ အလုပ် လုပ်သွားတာကို ပုံခိုင်းရရင် အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ စီးပွားရေးသမားဆိုရင်လည်း ငွေရှာကောင်းပေမယ့် အဖတ်တင်အောင် မစုဆောင်း နိုင်ကြသူ က များပါတယ်။ ဒါဟာ (7)ဂဏန်းသမားတွေ သတိပြုရမယ့် အချက်ပါ။
(7)ဂဏန်းသမားများ၏ သီးခြား Character တွေကတော့
(7)ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့ “ထီးတည်း” (7)သမားတွေဟာ စွန့်စားလိုစိတ်၊ တီထွင် လိုစိတ် ပြင်းပြ သူတွေဖြစ်ပြီး ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ထားလည်း ရှိကြတယ်ဗျ။ အလုပ်ကို မနားမနေလုပ်တတ်ပြီး အမြဲသွက်လက် ဖြတ်လတ်နေကြသူများလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ အသစ်အဆန်းကို ရှာဖွေလို တယ်။ စစ်သွေးစစ်မာန်ရှိပြီး ဘ၀တက်လမ်းအတွက် တိုက်ခိုက်ရမယ်၊ ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ၀န်မလေး ကြသူများဖြစ်တယ်။ ခရီးသွားလာမှုကို ခုံမင်ပြီး မရောက်ဘူးသေးတဲ့ နေရာမှန်သမျှ သွားလာလိုကြသူများဖြစ်ကြတယ်။
(25)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (7)ဂဏန်းသမားတွေကျတော့ စွမ်းအား အထက်မြက်ဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူချစ်လူခင် များတတ်ပြီး လူထုကို စည်းရုံး ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိတတ်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေအပေါ်မှာ အလွန် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိတတ်တယ်။ တစ်ချို့ (25)ရက်ဖွားများဟာ မြာသိပ်ပြီး ပွေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း လူဘုန်းကြီးလို့ ခေါ်ရလောက်အောင် သိက္ခာသမာဓိကြီးမားကြပြန်ပါတယ်။ (ဒါကတော့ သူတို့ ဘယ်ရာသီဖွားလဲ ဆိုတာ အပေါ်မှာတည်ပါတယ်)။ သူတို့ဟာ Current of Destiny မကောင်းရင် မတော်တဆထိခိုက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံရခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းခြင်း၊ ဥပစ္ဆေဒကကံဖြင့် သေဆုံးခြင်း၊ အိုဇာတာ ညံ့ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စကြောင့် ဘ၀ပျက် ရသူတွေထဲမှာ (25)ရက်ဖွားတွေ အများဆုံး မို့ သတိပြုဆင်ခြင်ကြပါလို့
သူနဲ့ တည့်တဲ့ဂဏန်း , မတည့်တဲ့ဂဏန်းတွေကတော့
(7)ဂဏန်းဟာလည်း (9)ဂဏန်းနဲ့ လုံးဝမတည့်ဘူးဗျ။ သူတို့နှစ် တွေ့မိရင် ပြဿနာကြီး တွေဖြစ်တတ်တယ်။ (7)ဂဏန်းဟာ (1)ဂဏန်း၊ (2)ဂဏန်း၊ (5)ဂဏန်း၊ (7)ဂဏန်း တွေနဲ့တော့ တကယ့် မိတ်ဘက် အစစ်ဘဲဗျ။ သူဟာ (4)ဂဏန်းသမား၊ (8)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့လည်း သိပ်မတည့် ပြန်ဘူး။ (3)ဂဏန်း (6)ဂဏန်းသမားတွေနဲ့ကျတော့ မိတ်လည်းမမည်၊ ရန်လည်း မမည်တဲ့ “ဥဒါသိန်” လို့ခေါ်တဲ့ ဂဏန်းတွေ ဖြစ်ပြန်တယ်ဗျ။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ (7)ဂဏန်းသမားတွေကတော့- အမေရိကန် မီလျံနာကြီး ဂျွန်ပီးယားပွန့်မော်ဂန် က (7)ရက်ဖွား၊ နာဇီဝါဒဖြန့်ချိရေးမှူး ဟင်းမလား က (7)ရက်ဖွား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ခေါင်းဆောင်ကြီး အလီဂျင်းနား က (25)ရက်ဖွား၊ သိပ္ပံပညာနက္ခတ်ပညာစွယ်စုံရ ပညာရှင် ဆာအိုက်ဇက်နယူတန် က (25)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး ဂျော့အော်ဝယ် က (25)ရက်ဖွား၊ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတကြီး ဒေးဗဒ် ဘင်ဂူရီယံ က (16)ရက်ဖွား၊ ကမ္ဘာကျော် လူရွှင်တော်ကြီး ချာလီချက်ပလင် က (16)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် စာနယ်ဇင်းလောကရဲ့ ဘုရင်မကြီး ကတ်သရင်း ဂရေဟမ်(နယူးစ်ဝိခ်) က (16)ရက်ဖွား၊ ဟောင်ကောင် အက်ရှင်မင်းသား အကျော်အမော် ဂျက်ကီချန်း က (7)ရက်ဖွား၊ အဆိုတော် မက်ဒေါနား က (16)ရက်ဖွား၊ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားကြီး ရှောင်ကွန်နရီ က (25)ရက်ဖွား၊ နောက် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား လက်သစ် ပီးယားစ်ဘရော့စ်နန် က (16)ရက်ဖွား၊ ရုရှားတင်းနစ်အလှမယ် အင်နာကော်နီကိုဗာ က (7)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီးအကျော်အမော် ကက်သရင်းဇီတာဂျုံး နဲ့ ကလော်ဒီယာ ရှက်ဖာ တို့က (25)ရက်ဖွားတွေ၊ အိန္ဒိယ ကဗျာနဲ့စာပေပညာရှင်ကြီး ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး က (7)ရက်ဖွား၊ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကိုရီးယားသရုပ် ဆောင် ဂျင်ဒေါင်ဂန်း(ဒါရိုက်တာ ရင်) က (7)ရက်ဖွား၊ နောက် ကိုရီးယား အဆိုကျော်နဲ့ မင်းသား “ရိန်း” က (25)ရက်ဖွား၊ ဟောလီဝုဒ် နာမည်ကျော်မင်းသား နီကိုလပ်စ်ကေ့ခ်ျ က (7)ရက်ဖွား၊ မကြာခင်ကမှ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသမီး သမ္မတဟောင်း ကိုရာဇွန်အကွီနို က (25)ရက်ဖွား၊ ယခုတလော ကမ္ဘာမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ် က (16)ရက်ဖွား၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဗြိတိသျှဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း လူးဝစ်မောင့်ဘက်တန် က (25)ရက်ဖွား၊ နောက်လုပ်ကြံခံရတဲ့ အီဂျစ် သမ္မတ အန်ဝါ ဆဒတ် ကလည်း (25)ရက်ဖွား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဖခင်ကြီး လီကွမ်ယူး က (16)ရက်ဖွား၊ သံမဏိသူဌေးကြီး အင်ဒရူးကာနေဂျီ က (25)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး ချားလ်ဒစ်ကင်း က (7)ရက်ဖွား၊ ဂရိသင်္ဘော သူဌေးကြီး အိုနာစစ် က (7)ရက်ဖွား၊ စာရေးဆရာကြီး ဆမ်းမားဆက်မွန် က (25)ရက်ဖွား၊ လေယာဉ်ပျံကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ ရိုက်ညီနောင် နှစ်ဦးထဲက ၀ီလ်ဘာရိုက် က (7)ရက်ဖွား၊ အန္တာတိကတိုက်သို့ စူးစမ်းလေ့လာရေး ခရီးရှည်ကြီးကို ထွက်ခဲ့သူ ကပ္ပတိန်စကော့ က (7)ရက်ဖွား၊ ဗြိတိသျှ အဲလီဇဘက် ဘုရင်မကြီး က (7)ရက်ဖွားတွေ အသီးသီးဖြစ်ကြပါတယ်။
နောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးနု (ခ)သခင်နု ဟာလည်း (25)ရက်မှာမွေးတဲ့ (7)ဂဏန်းသမား ပါဘဲဗျာ။
ဆရာမင်းသိင်္ခ ကလည်း (25)ရက်မှာမွေးတဲ့ (7)ဂဏန်းသမား ပါဘဲဗျာ။
အင်္ဂလိပ်မွေးနေ့ 8 . 17 . 26 နေ့မွေးသူများ အားလုံး (8)ဂဏန်းသမား များဖြစ်ကြပါတယ်....
(8)ဂဏန်းဟာ(1)ကနေ (9)အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဂဏန်းထဲမှာ အတော် စွမ်းအားထက်မြက်တဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်ဗျ။ သူဟာ စနေဂြိုဟ် (Satan)ရဲ့ အမှတ်အသား သင်္ကေတဖြစ်ပြီး ရှေးဟောင်း ဂရိ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာရော၊ ခေတ်သစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာမှာရော မကောင်းတဲ့ “နတ်ဆိုး” “မာန်နတ်” အဖြစ် သတ်မှတ်ကြတယ်ဗျ။ (8)ဂဏန်းဟာ (4)ဂဏန်းနဲ့ ကမ္ဘာရန်လို့ ဆိုရမယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးတွေ့တိုင်း ပြင်းထန်တဲ့
ဘေးဒုက္ခတွေ ဖြစ်တတ်တာကို သချာင်္ဗေဒ ပညာရှင်တွေဟာ အတော်ကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ကြတယ်ဗျ။ ဒီဂဏန်း (၂)ခုဟာ မတည့်ကြပေမယ့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆွဲအားတော့ အတော်ပြင်းထန်တယ် ဆိုရမယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် လင်မယားစုံတွဲ အတော်များများကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ (4)ဂဏန်းသမား နဲ့ (8)ဂဏန်း သမားတွေ ရကြတာ တော်တော်များတယ်။ ရပြီးတော့လည်း မတည့်ကြဘူး။ အဆင်မသင့်ရင် ကွဲကြပြန်ရော။
(8)ဂဏန်းသမားတွေထဲမှာ လူကောင်းတွေ၊ လူ့လောကကြီးကို အကျိုးပြုသူတွေ အများကြီးပါ။ (8)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းရပေမယ့် သူများတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေလို့ တော့ သတ်မှတ်လို့ မရပြန် ဘူးဗျ။ အထူးသဖြင့် (17)ရက်မှာ မွေးတဲ့ (8)ဂဏန်းသမားတွေဟာဆိုရင် စိတ်ထားနူးညံ့ကြပြီး လူ့လောကကို အကျိုးပြုသူတွေ ၊ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်ကြသူတွေ များတာ ကို တွေ့ရတယ်ဗျ။
(8)ဂဏန်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သင်္ကေတ လေးတွေက
အရပ် (၈)မျက်နှာ နဲ့ ဂြိုဟ်ကြီး (၈)လုံး၊ ငရဲဘုံ (၈)ထပ်၊ လောကဓံတရား (၈)ပါး၊ မဂ္ဂင် (၈)ပါး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဥပုဒ်စောင့်တဲ့ (၈)ပါးသီလ၊ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေမှာ ၀ိဇ္ဇာ(၈)ပါးဂုဏ်တော်၊ မဟာဘုတ်မှာ သက်ရောက်ဂြိုဟ် (၈)လုံး၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါယော၊ အာပေါ၊တေဇော ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကြီး (၄)ပါးကို အဖို , အမ ခွဲလိုက်ရင် ဓာတ် (၈)ပါးပွားများခြင်း၊ စစ်အင်္ဂါ (၈)ပါး၊ တွေဟာ (8)ဂဏန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်္ကေတာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တရုတ်လူမျိုး တို့ရဲ့ “ယိကျင်း”ဗေဒင်ပညာမှာ “ယင်ဓာတ်” နဲ့ “ယန်ဓာတ်”ကို အခြေခံထားပြီး “တြိရေခါ (8)ခု” နဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(8)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ လောကဓံများခဲ့ကြသူတွေများပြီး ဒုတိယ၊ တတိယ အရွယ်မှာ ကောင်းစားကြတာ များတယ်ဗျ။ သူတို့ဟာ ဘ၀မှာ နေရာကောင်းတစ်ခုရဖို့ အခက်အခဲပေါင်းများစွာ၊ ဒုက္ခပေါင်းများစွာကို အရင်းတည်ပြီးမှ ရလာကြသူတွေများ
တယ်ဗျ။ ရွှေဇွန်းကိုက်မွေးလာသူတွေ ရှိကောင်းရှိပေမယ့် အလွန်နည်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဇွဲကောင်း၊ သတ္တိကောင်းသူတွေဖြစ်ပြီး ၀ီရိယလည်း ကောင်းတတ်ကြတယ်။ လောကဓံတရားကို ခံနိုင်ရည် ရှိသူတွေဖြစ်ကြတယ်။
(8)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေး
(8)ဂဏန်းသမားတွေဟာ အချစ်ရေး နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ
အေးစက်စက် နိုင်ကြသူများဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့အချစ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ထုတ် ပြသလေ့မရှိတတ်ကြဘူး။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာ သစ္စာရှိတတ် ကြသူများဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် (26)ရက်ဖွား တွေ ကျတော့ သစ္စာတရား သိပ်တန်ဖိုးမထားတတ်ကြ ပြန်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင့်ဝတ္တရားတော့ ကျေပွန်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပြန်တယ်။
နောက်တစ်ခုက သင်္ချာသဘောအရ (8)ဂဏန်းနဲ့ တည့်တဲ့ ဂဏန်း ရှားပါတယ်။ (1)ဂဏန်း , တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဆိုတဲ့နေမင်းကို ဖက်ပြိုင်တုပနိုင်စွမ်းရှိတာ (8)ဂဏန်းဘဲရှိတော့ သူနဲ့လည်း မတည့်ဘူး။ (2)ဂဏန်းသမားကျတော့ အလွန်အားပျော့တဲ့အတွက် သူလုပ်သမျှ ခံရမယ့် ဂဏန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ ကြာသပတေးဂြိုဟ် (3)ဂဏန်း သမားကျတော့ ဘုရားသခင်၊ တရားဓမ္မကို အစိုးရတဲ့ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး (8)ဂဏန်းက မိစ္ဆာဂြိုဟ် အမှတ်အသားဖြစ်တော့ မတည့်ပြန်ဘူး။ လူချင်းတည့်ချင်တည့်မယ်။ ဓာတ်မတည့်ဘူး။
(4)ဂဏန်း သမားနဲ့ ကျတော့ ကမ္ဘာရန်။ အဲ- (5)ဂဏန်းသမားကတော့ အားလုံးနဲ့ မိတ်ဖြစ်အောင် ပေါင်းနိုင်တော့ တည့်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ (6)ဂဏန်းသမားတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေ ဆိုတော့ (8)ဂဏန်းကို သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ (7)ဂဏန်းသမား နဲ့လည်း သဟဇာတ ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ (8)ဂဏန်းသမားခြင်းလည်း မဆိုးပါဘူး။
(9)ဂဏန်းနဲ့ကျတော့ စနေ အင်္ဂါ တွဲမိရင် ဘေးဥပဒ်ဆိုးတွေ၊ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ အနိဌာရုံတွေ ဖြစ်နိုင်ပြန်ပါရော။
(8)ဂဏန်းသမား (၃)မျိုးရဲ့ သီးခြား စရိုက်လက္ခဏာတွေ
အင်္ဂလိပ် (8)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ (8) ဂဏန်းကတော့ “ထီးတည်း” ဂဏန်းသမားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပေါင်းရ၊ သင်းရ ကြပ်တတ်တယ်။ နဲနဲ ဂွကျကျ လူစားမျိုးတွေဘဲ။ အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ဇွဲနဘဲ ကြီးတယ်။ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် နေတတ်တယ်။ အပြောအဆိုတိုတောင်းတတ်တယ်။ မာယာ ပရိယာယ် မရှိတတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတရားကိုလည်း အလွန်သိတတ် သူများဖြစ်တယ်။ ကပ်စေးနဲ လက်ပေါက်ကပ်သူများလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ လူအများနဲ့ ဒွေးရော ယှက်တင် နေလေ့ မရှိတတ် ကြဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် “အလုပ်စွဲ ရောဂါ” စွဲကပ်နေသူများတောင် တွေ့ရပါတယ်။
= အင်္ဂလိပ်ရက် (17)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့သူတွေကတော့ (8)ဂဏန်းသမားတွေထဲမှာ “ရှယ်” လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ (8)ဂဏန်း သမားတွေကလည်း (17)ရက်ဖွားတွေ ပိုများတယ်ဗျ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက “ဂဏန်းဗေဒင်ဟာ တားရော့ကဒ်တွေနဲ့ သွားပြီး ဆက်စပ်ရုံမျှမက တားရော့ကဒ်ဂဏန်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံး ခံရတဲ့ သဘော” ကို သွားတွေ့တယ်ဗျ။
ဂဏန်းဗေဒင်ပညာကို တဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ချင်ရင် “တားရော့” ကို လုံးဝ လက်လွှတ်လို့ မရဘူး။ ပိုင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။ (17)ဂဏန်းဟာ တားရော့ကဒ်မှာ “The Star , သောကြာကြယ်” ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကဒ်ဖြစ်တယ်။ “မှော်ဆရာရဲ့ကြယ်” လို့လည်း ခေါ်တယ်။ ဒီကဒ်ဟာ အလွန်အတိတ်နိမိတ်ကောင်းတဲ့ ကဒ်ဖြစ်တယ်။ ဂမ္ဘီရ ပညာရပ်တွေနဲ့လည်း ပတ်သက် နေတဲ့ဂဏန်း ဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာကျော် (8)ဂဏန်းသမားတွေကတော့ – ဗြိတိသျှ နန်းရင်းဝန် အကျော်အမော် “လွိုက်ဂျော့” က (17)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဂျွန်ပီးယားပွန့် မော်ဂန် (စီနီယာ)က (17)ရက်ဖွား၊ အာရေဗျသဲကန္တာရမြေခွေးလို့ နာမည်ရတဲ့ ဗြိတိသျှ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး “မောင့်ဂိုမာရီ” က (17)ရက်ဖွား၊ ဟေလီ ကြယ်တံခွန်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ နက္ခတ်ပညာရှင် “အက်ဒမွန် ဟေလီ” က (8)ရက်ဖွား၊ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ဟောင်း ဆူဟာတို က (8)ရက်ဖွား၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဂျပန်တွေကို မောင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာ အရေး ပါခဲ့ပြီး လေယာဉ်ပျက်ကျ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် “အော်ဒီ ၀င်းဂိတ်” က (26)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားကြီး “ဂျွန်ဝိန်း” က (26)ရက်ဖွား၊ အော်စကာဆုတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရခဲ့တဲ့ မင်းသား “ဒတ်စတင် ဟော့ဖ်မန်း” က (8)ရက်ဖွား၊ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ ရူမေးနီးယားသမ္မတ “နီကိုလပ်စ် ချောင်စက်စကူ” က (26)ရက်ဖွား၊ ဘက်စကတ်ဘော ချန်ပီယံ “မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် ” က (17)ရက်ဖွား၊ သဘောထား ပျော့ပြောင်းတဲ့ ဆိုဗီယက်အာဏာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “နီကီတာ ကရူးရှက်ဗ်” က (17)ရက်ဖွား၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ဟောလီဝုဒ် အက်ရှင် မင်းသား “ဂျက်လီ” က (26)ရက်ဖွား၊ တင်းနစ်ချန်ပီယံ “ရော်ဂျာဖက်ဒရာ” က (8)ရက်ဖွား၊ ဂျာမန် ဘောလုံးစတား “မိုက်ကယ်ဘောလက်” က (26)ရက်ဖွား၊ နောက်စတား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ “ဂျိုလ်ကိုးလ်” က (8)ရက်ဖွား၊ မော်ဒယ် “ပဲရစ် ဟီလ်တန်” က (17)ရက်ဖွား၊ ဟာသမင်းသား “ဂျင်ကာရေး” က (17)ရက်ဖွား၊ အက်ရှင်မင်းသား “ကာ့တ်ရပ်ဆဲလ်” က (17)ရပ်ဖွား၊ ကမ္ဘာကျော် ဂီတပညာရှင်ကြီး “ဗီသိုဗင်” က (17)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ပညာရှိကြီး “ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင်” က (17)ရက်ဖွား၊ တစ်ချိန်က “ရော့အင်ရိုးလ်” နဲ့ တေးဂီတနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ “အဲလ်ဗစ် ပရက်စလေ” က (8)ရက်ဖွား၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်နဲ့ စာရေးဆရာကြီး “ဂျော့ဘားနတ်ရှော” က (26)ရက်ဖွား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မက်အာသာ က (26)ရက်ဖွား၊ လက်ဝှေ့အကျော်အမော် “မိုဟာမက်အလီ” က (17)ရက်ဖွား၊ တရုပ်နီ ခေါင်းဆောင်ကြီး “မော်စီတုန်း” က (26)ရက်ဖွား၊ “ဆိုနီ” အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ဖခင်ကြီး “မိုရိတ အကီယို” က (26)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သူကြွယ်ကြီး “ဂျွန်ဒီ ရောက်ဖဲလား” က (8)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန်သမ္မတ “ဟယ်ရီ အက်စ် ထရူးမင်း” က (8)ရက်ဖွား၊ “လေရူးသုန်သုန်” ၀တ္တုတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတဲ့ စာရေးဆရာမ “မာဂရက် မစ်ချယ်” က (8)ရက်ဖွား၊ လူသေသော်လည်း ယနေ့ထိအောင် နာမည်မသေသေးတဲ့ ဗြိတိသျှ ပြဇာတ်စာရေးဆရာကြီး “၀ီလျှံ ရှိတ်စ်ပီယား” က (26)ရက်ဖွား၊ ကမ္ဘာ့ ကြက်ခြေနီ ဖခင်ကြီး “ဟင်နရီ ဒူးနန့်” က (8)ရက်ဖွား၊ သန်းကြွယ်သူဌေး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း “သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်”က (26)ရက်ဖွားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
အဂ်လိပ်လို9. 18 . 27 ရက်မွေးသူများဟာ (9) ဂဏန်းသမားများ
(9)ဂဏန်းဟာ ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ ကောင်းသလို ဆိုးတဲ့နေရာမှာလည်း အတော်ဆိုးတတ် တယ်ဗျ။ (9)ဂဏန်းကို ဂဏန်းအားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဂဏန်းလို့ လုံးဝ မယူဆဘူး။ တစ်ကယ်ဆို (9)ဂဏန်းဟာ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဆိုးကျိုးမှာ ချိန်ခွင်လျှာ တင်ကြည့်ရင် ဆိုးတဲ့ ဘက်ကတောင် ပိုများတယ်လို့ ပြောချင် ပါတယ်ဗျာ။ သင်္ချာဗေဒ မှာ “ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်” ရဲ့ သင်္ချာ နဲ့ ရှေးဟောင်း “ချားလ်ဒီးယန်းသင်္ချာ” ဆိုပြီး (၂)မျိုး ရှိရာမှာ “ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်” သင်္ချာမှာ (9)ဂဏန်းကို အသုံးပြုထားပေမယ့် “ချားလ်ဒီးယန်း” သင်္ချာမှာတော့ (9)ဂဏန်းကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂဏန်း ဆိုပြီး ဘယ်အက္ခရာကို မှ အသုံးပြု မထားတာကို သတိထားမိမှာပါ။ (9)ဂဏန်းဟာ သချာင်္ဗေဒမှာ “အင်္ဂါဂြိုဟ်” ပိုင်တဲ့ ဂဏန်းဖြစ်တယ်။ အင်္ဂါဂြိုဟ် ဟာ ရောမဒဏ္ဍာရီမှာ “စစ်နတ်ဘုရား”လို့ သတ်မှတ်ပြီး စစ်ပွဲများ၊ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ သွေးထွက်သံယိုမှုများ၊ မီး , လျှပ်စစ် နဲ့ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများ၊ ဒါး၊ လှံများလို ချွန်ထက် တဲ့ ပစ္စည်းများ၊ စက်ကရိယာ ပစ္စည်းများနဲ့ ကပ်ရောဂါများ၊ ဘေးဆိုးအန္တရာယ်များ နဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဇာတာတစ်စောင်မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ် အားကောင်းတဲ့ သူများဟာ စစ်ဘက်၊ စက်မှုလက်မှုဘက်၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာ(အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း) တွေမှာ အကျိုးပေး၊ ထူးချွန်တတ်သူတွေ များတယ်ဗျ။
(9)ဂဏန်း နဲ့ (7) ဂဏန်းဟာ ကမ္ဘာရန်ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် (9)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ပေါင်းလိုက်ရင် (7)ဂဏန်း ကျတဲ့ အသက်ပိုင်းတွေ (ဥပမာ- 34နှစ်)၊ (7)ဂဏန်းပါတဲ့ အသက်ပိုင်းတွေ (ဥပမာ-47)တွေမှာ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးတွေ ထိခိုက်တတ်တယ်။ (9)ဂဏန်း နဲ့ နောက်ထပ် မတည့်တာက (8)ဂဏန်း။ (9)ဂဏန်းက အင်္ဂါဂြိုဟ် ၊ (8)ဂဏန်းက စနေဂြိုဟ်။ ဒီဂြိုဟ်နှစ် လုံးပေါင်းမိရင် မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခြင်း၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးဥပါဒ်များနဲ့ Accident မျိုးစုံကို ဖြစ်စေ နိုင်တာကို သတိပြုရမယ်။ နောက်မတည့်တဲ့ ဂဏန်းကတော့ (4)ဂဏန်းပေါ့ဗျာ။ (4)ဂဏန်း နဲ့ (9)ဂဏန်း နှစ်ခု ပေါင်းစုံမိရင်လည်း Accident တွေ၊ ဘေးဥပဒ်တွေ၊ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် (9)ဂဏန်း၊ (8)ဂဏန်း နဲ့ (4) ဂဏန်း ဆိုတဲ့ ဂဏန်း (၃)လုံး ပေါင်းစည်း မိပြီဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘေးဥပဒ်တွေ ဖြစ်စေ နိုင်တယ်ဗျ။ (9)ဂဏန်း သမားတွေဟာ (1)ဂဏန်း၊ (3)ဂဏန်း၊ (5)ဂဏန်း၊ (6)ဂဏန်းများနဲ့တော့ တည့်ပြီး (2)ဂဏန်း သမားနဲ့ ဥဒါသိန် လို့ ခေါ်တဲ့ အလယ်အလတ် ဂဏန်းပေါ့ဗျာ။
(9)ဂဏန်း တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ ၀ိသေသ လက္ခဏာလေးတွေ
(9)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (9)ထီးတည်း သမားတွေကတော့ ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်မယ်။ ကိုယ်မွေးပြီး မိဘတွေ စီးပွားကျတာ၊ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ခေါင်းမာတယ်။ အကြောမာတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြီးမှ ကောင်းလည်းခံ၊ ဆိုးလည်း ခံ ပေါ့။ သူတစ်ဖက်သားနေရာက ၀င်ပြီးစဉ်းစားတတ်တဲ့ စိတ်သဘောမျိုး နည်းတယ်။ ဆွေမျိုးများနဲ့ မသင့်မတင့် အလွန်ဖြစ်မယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အင်္ဂါသမီး၊ စနေသမီးတို့ ၊ (၂)ကြွင်း ၊ (၃)ကြွင်း ၊ (၆)ကြွင်းဖွား တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ပျက်ခြင်း၊ ကွဲခြင်း၊ မုဆိုးမဖြစ်ခြင်းများ အလွန်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် (9)ဂဏန်း သမားများ
ကမ္ဘာကျော် (9)ဂဏန်းသမားတွေကတော့ – ကဗျာဆရာကြီး လောင်းဖဲလိုး က (27)ရက်ဖွား၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဘင်နီနို အကွီနို က (27)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ရစ်ချတ်နစ်ဆင် က (9)ရက်ဖွား၊ နိုဘယ်ဆုရှင် နယ်လဆင်မန်ဒဲလား က (18)ရက်ဖွား၊ သြစတြီးယား အိမ်ရှေ့မင်းသား ဖရန်စစ်ဖာဒီနန် က (18)ရက်ဖွား၊ နိုဘယ်ဆုရှင် ဂျွန်စတိန်းဘတ် က (27)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျားက (27)ရက်ဖွား၊ မော့စ် ကြေးနန်းစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့သူ ဆင်မြူရယ် မော့စ် က (27)ရက်ဖွား၊ အာကာသထဲကို ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့သူ ယူရီဂါဂါရင် က (9)ရက်ဖွား၊ ဆွံအ နားမကြား၊ မျက်မမြင်ဘ၀နဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ တွေယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဟယ်လင်ကယ်လား က (27)ရက်ဖွား၊ ဂျာမန် နက္ခတ်ပညာရှင် ကတ်ပလာ က (27)ရက်ဖွား၊ အက်ရှင်မင်းသား ဂျင်းကလောက် ဗန်ဒိန်း က (18)ရက်ဖွား၊ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ကီဗင် ကော့စနာ ၊ ဂျွန်ထရာ ဗိုလ်တာ နဲ့ ဘရက်ပစ် တို့က (18)ရက်ဖွားတွေ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေချိန်မှာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားရ ရှာတဲ့ ဟောင်ကောင် ကွန်ဖူးမင်းသား ဘရုစ်လီ က (27) ရက်ဖွား၊ နောက်လက်ရှိ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ဟောင်ကောင် အက်ရှင်မင်းသား ချောင်ယွန်ဖတ် က (18)ရက်ဖွား၊ အဆိုကျော် ခရစ္စတီးနား အဂွီလီးယား က (18)ရက်ဖွား၊ သဘာဝ မင်းသား တွမ်ဟန့်ခ် က (9)ရက်ဖွား၊ ကလီယိုပက်ထရာ ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အိမ်ထောင် (၇)ဆက်ပြုခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး အဲလီဇဘက်တေလာ က (27)ရက်ဖွား၊ ကမ္ဘာကျော် ဂီတပညာရှင် မိုးဇက် က (27)ရက်ဖွား၊ ဘီတယ် အဆိုကျော် ဂျွန်လီနွန်က (9)ရက်ဖွား၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ က (18) ရက်ဖွား၊ ဆိုဗီယက် အာဏာရှင် ဂျိုးဇက် စတာလင် (18)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဟင်နရီ ဂျေ ကိုင်ဇာ က (9)ရက်ဖွား၊ မဟာဂရုဏာရှင် မာသာထရီဇာ က (27)ရက်ဖွား၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း သီအိုဒို ရု့စ်ဘဲ က (27)ရက်ဖွား၊ ကဗျာစာဆိုကြီး အိုမာခေရမ် က (18)ရက်ဖွား အသီးသီး ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာ။